135 – Mogok Meditation
Total visitors : 39,812
Total page view: 61,583
အသံဖိုင်ခေါင်းစဉ်= ကံနှင့်တဏှာတွင်တဏှာက ပိုအရေးကြီးပုံ ည-အလုပ်ပေးတရားတော်
စာအုပ်ခေါင်းစဉ်= တဏှာနှင့်ကံ ဘယ်ဟာကြောက်စရာကောင်းသတုံး
( ၂၈-၁၁-၆၁ )
ဒကာ ဒကာမတို့ ပြန်ပြောကြစို့ တဲ့၊ လူတစ်ယောက် တည်းကနေပြီး သကာလ၊ သားကောင် ခြောက်ကောင် ကျောင်းရတယ်ဆိုတာက ဆပ္ပါဏကောပမသုတ်ပါပဲ၊ ဆ-က ခြောက်၊ ပါဏကောပမက- သတ္တဝါနဲ့ တူတယ်၊ အဲဒီခြောက်ပါး သော ခြောက်နိုင်သောသတ္တဝါတွေ ထိန်းရကျောင်းရတာ သည်၊ ထိန်းတတ်ကျောင်းတတ်လို့ ရှိရင်လည်း နိဗ္ဗာန်ပေါက် တယ်၊ မထိန်းတတ် မကျောင်းတတ်လို့ရှိရင်လည်း ဆွဲရာပါတယ်လို့ မှတ်ရမယ် (မှန်ပါ့)။
အဲဒီတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သိတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ကိုလည်း ရှင်းရမယ်၊ ဥပမာ- အခုလို ပွဲလမ်းသဘင်တွေ ရှိတယ် ဆိုလို့ရှိရင်၊ အင်း ဒီဥစ္စာ မြွေက ဆွဲသွားတာပဲဆိုတာ လူတိုင်း သိကြပါတယ် (မှန်ပါ့)။
မြွေကဆွဲသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် မြွေနောက်ကို ပုဂ္ဂိုလ် က လိုက်သွားတယ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်က လိုက်သွားတော့ ဥပမာ ရှုပ်ပွေ နေတဲ့ အထဲ တိုးဝှေ့နေရတဲ့အထဲ ဗရုတ်သုက္ခတွေအထဲမှာ ရောက်သွားတယ်၊ အဲဒါ မျက်လုံးပေါက်က အကောင်က သန်ရာဆွဲလို့ ပါသွားတာ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
အဲဒါ သန်ရာဆွဲလို့ပါသွားတော့ ကိုယ်က သွားမိ တော့၊ ပွဲလည်းကြည့်ရင်း တော်တော်ကြာ ကျတော့၊ ပွဲကြည့်ရင်း မတ္တနဲ့ ဆာလောင် မွတ်သိပ်လာတော့၊ အစာအဟာရကလေး စားကြပြန်တယ်၊ စားကြပြန်တော့ အိမ်ခွေးဆွဲတဲ့ဘက် ပါသွား ပြန်ရော (မှန်ပါ့) တော်တော်ကြာကျတော့ ငိုက်မြည်း လာပြီဆိုမှ ဖြင့် တောခွေး ဆွဲတဲ့ဘက် ပါသွားပြန်ရော (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ကိုယ်က နိုင်တာကိုမပါဘူး (မပါပါ ဘုရား) သူတို့ ဆွဲရာသာ ကိုယ်ပါနေတယ်ဆိုတာ မောင်သစ်တို့ ရိပ်မိပလား (ရိပ်မိပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒီသားကောင်ခြောက်ကောင်မှာ ကျောင်းရတဲ့ လူက တစ်ယောက်တည်း၊ ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ခြောက်ကောင် ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့၊ ဒါကြောင့် ဒွါရခြောက်ပေါက်၊ သားကောင် ခြောက်ကောင်သည်၊ ဒကာ ဒကာမတွေဟာ ဆွဲရာပါပြီး သကာလ နေသောကြောင့် သေရာနေရာ မရွေးနိုင်ဘူး (မှန်ပါ့ ဘုရား) နေတာလည်း နေရာမရွေးနိုင်ဘူးဆိုတာ မှတ်ရ မယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) သေတာ (နေရာ မရွေးနိုင်ပါ ဘုရား) နေတာ (နေရာမရွေးနိုင်ပါ ဘုရား)။
မျက်လုံးပေါက်က ဆွဲသွားတယ်၊ မျက်လုံးပေါက်က မြွေကိုး၊ သူက အရှုပ်ကြိုက်တယ် (မှန်ပါ့) ပွဲလမ်းသဘင် လူတွေ ထဲ တိုးဝှေ့ပြီး နေရလို့ရှိရင်၊ သူက မြွေဆိုတာက ကွင်းပြင် လွှတ်လို့မှ မရဘဲ ဦးသံဒိုင် (မှန်လှပါ ဘုရား) အရှုပ်ထဲပဲ သွားလေ့ရှိတယ်။
အရှုပ်ထဲသွားတဲ့အခါကျတော့၊ မြွေဆွဲရာ မျက်လုံး ပေါက်ဆွဲရာကို၊ မျက်လုံးပေါက်က စိတ်တွေကဆွဲရာကို ပါသွားတယ် (မှန်ပါ့) ပါသွားတဲ့ အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့် တဲ့၊ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသည် အဆင်းအာရုံ ကာမဂုဏ်ထဲမှာ မျောတော့တာပဲ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ဒီလိုမျောနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် တဲ့၊ ဘယ်မှာ သာလျှင် ခင်ဗျားတို့ လွတ်မလဲ မျက်လုံးပေါက်က ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ် လာပြီလို့ ယနေ့ရှင်းလိုက်ပါ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
မျက်လုံးပေါက်က ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာ စက္ခုံ စ ပဋိစ္စ မျက်လုံး အကြည်ရုပ်၊ ရူပေ စဆိုတာ ပွဲလမ်းသဘင်၊ စက္ခုဝိညာဏံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ ဆိုတာ ပေါ်လာပြီ “တိဏ္ဏံ သင်္ဂတီတိ ဖဿော ဖဿ ပစ္စယာ ဝေဒနာ၊ ဝေဒနာ ပစ္စယာ တဏှာ၊ တဏှာပစ္စယာ ဥပါဒါနံ၊ ဥပါဒါနပစ္စယာ ကမ္မဘဝေါ၊ ကမ္မဘဝပစ္စယာ ဇာတိ ဇာတိဆို တော့ အပါယ်ဇာတိ လာပစ်လိုက်တာပဲ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
သေရင် အပါယ်ဇာတိလာတယ် (မှန်ပါ့) ဇာတိလာပြီး လို့ရှိရင် ဇရာမရဏ ဒုက္ခသစ္စာကြီးဟာ ဦးသံဒိုင် ပြေးလို့ လွတ်ပါ့ မလား (မလွတ်ပါ ဘုရား)။
မျက်လုံးပေါက်က ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တန်းသွားပြီ (မှန်ပါ့) မြွေဆွဲရာ ပါသွားလို့ အရှုပ်ထဲ ရောက်သွားလို့ အပါယ် ပါ ရောက်သွားပြီဆိုတာ သဘောကျကြပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဟိုက ဥပမာ၊ တကယ့်ဖြစ်စဉ်က အခုပြောတဲ့ ပါဠိတော်လို့ မှတ်လိုက်ပါ (မှန်ပါ့ ဘုရား) စက္ခုံ စ ပဋိစ္စ ရူပေစ (ပေယျာလ) ကမ္မဘဝေါ ကာယကံ ဝစီကံတွေလည်း လုပ်ကြမှာပဲနော် (မှန်ပါ့)။
ကမ္မ ဘဝပစ္စယာ ဇာတိ၊ ဇာတိဆိုတာ ဒီမျက်လုံး ပေါက်က ဆွဲလို့သွားတဲ့ ဇာတိဟာ၊ အပါယ်ဇာတိမှ တစ်ပါး ဒီပြင် ဇာတိကို မောင်သစ် ရွေးလို့ရပါ့မလား (မရပါ ဘုရား) မရဘူး။
အဲဒီတော့ ကျုပ်ဇာတိ ရှာချေဦးမယ်ဆိုပြီး သွားဖို့ ကောင်းတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) အပါယ်ဇာတိ ကျုပ်ရှာချေ ဦးမယ် ကျုပ် အပါယ်ကျရာက ပြန်လာတာ မကြာသေးဘူး၊ ပြန်သွား ရအောင်တော့ ကျုပ်လုပ်ဦးမှာ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ ဒါ ဆရာက မပြောလဲ ဓမ္မက ဖြစ်နေတာပဲ (မှန်ပါ့) ဆရာ ပြောတယ် ဆိုတာ ဖော်ပြတယ်လို့ မှတ်လိုက်စမ်းပါ (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
ဒါဖြင့် မြွေဆွဲရာပါလဲ အပါယ်ရောက်မှာပဲ (မှန်ပါ့) ဒီကနေပြီး နားကလဲ တီးသံ၊ မှုတ်သံ၊ သီချင်းသံကြားပြန်တယ် ဆိုလို့ရှိရင် နားပေါက်က ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကလဲ ဦးသံဒိုင် လာမလား (လာပါတယ် ဘုရား)။
လာရမှာပဲ “သောတဉ္စ ပဋိစ္စ သဒ္ဒေ စ ဥပ္ပဇ္ဇတိ သောတဝိညာဏံ’’ ဆိုတဲ့ ကြားစိတ် ကလေးပေါ်မှာပဲ၊ သုံးခု ပေါင်းမိတော့ ဖဿ၊ ဖဿပစ္စယာ ဝေဒနာ၊ ဝေဒနာပစ္စယာ တဏှာ၊ တဏှာပစ္စယာ ဥပါဒါနံ၊ ဥပါဒါနပစ္စယာ ကမ္မဘဝေါ၊ ဇာတိ ဒါက မိချောင်းဆွဲရာပါတာ၊ သဘောကျပလား (ကျပါပြီ)။
ဒါဖြင့် ဒွါရခြောက်ပေါက်မှာ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဘယ်နှစ်မျိုး လာနိုင်သတုံး (ခြောက်မျိုး လာနိုင်ပါတယ်) ခြောက်မျိုး လာနိုင်တယ် တဲ့။
ဒါဖြင့် ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေမှာ သူတို့ ဆွဲရာ သာ ပါနေကြလို့ရှိရင်ဖြင့် အပါယ်ငရဲက တက်ဖို့အကြောင်း မြင်ကြသေးရဲ့ လား (မမြင်ပါ ဘုရား)။ ။
ဘာဖြစ်လို့တုံး ဆွဲရာပါလို့ (မှန်ပါ့ ဆွဲရာပါလို့ပါ) မြွေဆွဲရာပါလိုက်၊ မိကျောင်းဆွဲရာ (ပါပါတယ်) ပါလိုက်တဲ့၊ ငှက်ဆွဲရာကော (ပါ-ပါတယ်)။
ပါသွားတာပဲတဲ့၊ ငှက်ကလဲ ကောင်းကင်ဆွဲသွားတယ် ဆိုတာပဲ၊ သူကလည်း ဃာနဉ္စ ပဋိစ္စ ဂန္ဓေစ ဥပ္ပဇ္ဇတိ ဃာန ဝိညာဏံ တိဏ္ဏံ သင်္ဂတီတိ ဖဿာနဲ့ သွားလေ ကမ္မဘဝ ပစ္စယာ ဇာတိ (မှန်ပါ့)။
ဒါဖြင့် ခင်ဗျားတို့ သန္တာန်မှာရှိတဲ့ ဒွါရခြောက်ပေါက်ဆို တဲ့ သားကောင်ခြောက်ကောင်ဟာ၊ ဒကာ ဒကာမတွေက မနိုင်ဘဲနဲ့ သူတို့က နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်၊ အပါယ်မှာနေ အပါယ်မှာ သေဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ရှင်းသွားတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) ဘယ်မှ ရွှေ့စရာ၊ ပြောင်းစရာ ရှိသေးရဲ့လား (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟာ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး လဲ၊ ငါ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်လို့ ဘုရားဖြစ်တာ၊ ဒကာ ဒကာမတွေ ကလဲ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဆက်လို့ ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ ပြောင်းပြန် မှတ်ရမယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆက်ရင် (ဒုက္ခရောက်ပါတယ် ဘုရား) ဒုက္ခရောက်မှာပဲ၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်ရင် နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲ (မှန်ပါ့) ဒုက္ခပိတ်မှာပဲ (မှန်ပါ့) ပေါ်ပြီနော် (ပေါ်ပါပြီ)။
ဒါဖြင့် ဒီဒကာ ဒကာမတွေသည် သုဂတိတောင်မှ မြင်သေးရဲ့လား မေးရင် ဘယ့်နှယ် ဖြေကြမလဲ (မမြင်ပါ ဘုရား) မမြင်ဘူး သုဂတိတောင် မမြင်တော့ဘူး၊ ဒုဂ္ဂတိချည်း သွားတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) ဒုဂ္ဂတိဆိုတာ အပါယ်လေးပါး ချည်းမှတ်ပါ (မှန်ပါ့)။
ဘာကြောင့်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်၊ ကိုယ်မွေးထားတဲ့ သားကောင်ခြောက်ကောင် ကိုယ်မနိုင်လို့ မှတ်ပါ (မှန်ပါ့) ကိုယ့် သန္တာန်ရှိတဲ့ သားကောင် ခြောက်ကောင်ကို (ကိုယ်မနိုင်လို့ ပါ ဘုရား)။
ကိုယ်မနိုင်တော့ အင်း ဟင်၊ ကိုယ့်သန္တာန်မှာလဲ ပေါ်လာသေးတယ်၊ သူတို့ကလဲ အနိုင်ယူပြီး သကာလ ဒီဒကာ ဒကာမတွေကို ဆွဲရာပါသေးတယ် ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် တဲ့၊ မြတ်စွာဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလူတစ်သိန်း သေလို့ သုဂတိတစ်ယောက် မရောက်ဘူး ကွဆိုတာ ဦးသံဒိုင် စကားကြီးသလား ၊ မှန်သလား (မှန်ပါတယ် ဘုရား)။
စကားမကြီးပါဘူး (မကြီးပါ ဘုရား) စကားမကြီး ပါဘူးတဲ့၊ ဖြစ်စဉ်နဲ့ ကိုက်ကြည့်ပါ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
အဲဒီတော့ ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် မမြင်တော့ဘူး၊ တပည့် တော်ဖြင့် မပြတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်၊ အပါယ်သံသရာကြီး ဟာ ကိုယ့်သံသရာမှတ်ပါ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
အပါယ်လေးပါးဟာ (ကိုယ့်သံသရာပါ ဘုရား). ကိုယ့်သံသရာ ကိုယ့်နေရာဌာန ဆိုပြီး သကာလ သေသေချာချာ သာ မှတ်ပါတော့ ဆိုတဲ့ဥစ္စာ၊ တဏှာ ဥပါဒါန် ကံလာတယ်ဆို ကတည်းက၊ မောင်သစ်တို့ ဦးသံဒိုင်တို့က အကျိုးမပေးပါနဲ့ ဆိုလို့မရပါဘူး (မရပါ ဘုရား) မရဘူးနော်၊ သဘော ကျကြပလား (ကျပါတယ် ဘုရား)။
အဲဒီတော့ ခဏတစ်ဖြုတ် သွားလိုက်ဦးမယ်၊ ဒကာ ဒကာမတွေ စကားယဉ်တော့ သုံးနေတယ် (မှန်ပါ့) ခဏ တစ်ဖြုတ်လမ်းကလေး သွားလျှောက်ဦးမယ်၊ ဘာကလေး ညာကလေး ကြည့်ရ ကြည်ညို ရအောင်။
သူတို့ ကြည်ညိုတာကလဲ ဒီဥစ္စာတဏှာဖြစ်လာတာ (မှန်ပါ့) တဏှာဖြစ်လာတာတဲ့ ကြည်ညိုတာ မဟုတ်ပါဘူး (မှန်ပါ့)။
ကြည်ညိုတာ မဟုတ်ပါဘူး-တဲ့၊ တဏှာက အရှုပ်ကြိုက် , လို့ မျက်လုံးက အရှုပ်ကြိုက်လို့ အရှုပ်တွေ သွားကြည့်တာ (မှန်ပါ့ ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
ဒါဖြင့် သားကောင် ခြောက်ကောင် ကျောင်းတဲ့လူက ဘယ်နှစ်ယောက်တုံး (တစ်ယောက်တည်းပါ ဘုရား)။
တစ်ယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင် ခင်ဗျားတို့ သန်ရာဆွဲ သွားလိမ့်မယ်၊ သန်ရာဆွဲဆိုတာ မြွေကသန်ရင် မြွေကဆွဲမယ် (မှန်ပါ့) မိကျောင်းကသန်ရင် (မိကျောင်းကဆွဲပါ မယ်) ငှက်ကသန်ရင် (ငှက်ကဆွဲပါမယ်) အိမ်ခွေးက သန်ရင် (အိမ်ခွေးကဆွဲပါမယ်) တောခွေးကသန်ရင် (တောခွေးကဆွဲ ပါမယ်) မျောက် ကသန် ရင် (မျောက်ကဆွဲပါမယ်) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
အဲဒီတော့ ခင်ဗျားတို့မှာ နေစရာမမြဲ သေစရာမမြဲ ယခု ပစ္စုပ္ပန်မှာ နေရတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
နောက် ဘဝဆုံးသွားတဲ့အခါ၊ ဒီဘဝမှ စုတိမနေ သေလွန်တဲ့အခါကျတော့ကို အပါယ်လေးပါး မှာတော့ အမြဲ နေရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာ၊ ဘာဖြစ်လို့နေရတာတုံးလို့ မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်၊ သားကောင် ခြောက်ကောင် မထိန်းနိုင်လို့ (မှန်ပါ့ ဘုရား) ပေါ်ကြပလား (ပေါ်ပါပြီ) ဘာဖြစ်လို့ အပါယ်လေးပါး ရောက်ကြရသလဲ (သားကောင် ခြောက်ကောင် မထိန်း နိုင်လို့ပါ ဘုရား)။
မထိန်းတတ်ဘူး တဲ့၊ ထိန်းတတ်လို့ရှိရင် ဒီကောင် တွေဟာ ခင်ဗျားတို့၏ ကျေးဇူးများမှုကို ရွက်ဆောင်နိုင်ပါတယ် (မှန်ပါ့)။
အခုတော့ မထိန်းတတ်ဘူးဆိုကတည်းက၊ သူတို့သန် ရာ ဆွဲသွားတော့ကို ခင်ဗျားတို့မှာဖြင့်၊ မြွေကဆွဲရင် ရှုပ်တဲ့အထဲ မှာ သေရမယ်၊
မိကျောင်းကဆွဲရင် ရေထဲမှာ သေရမယ်၊
ငှက်ကဆွဲရင် ကောင်းကင် သေရမယ်၊
ခွေးကဆွဲရင် မီးဖိုချောင် သေရမယ်၊
တောခွေးကဆွဲရင် သုသာန်မှာသေရမယ်၊ တောထဲ မှာ သေရမယ်၊
မျောက်ကဆွဲရင် သစ်ပင်ခွကြားသေရမယ်၊ မနောဒွါရက မျောက်နဲ့တူတယ်ဆိုတာကို ဘုရားက (မှန်ပါ့ ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
အဲဒီတော့ ဒီလိုလုပ်ရမယ် တဲ့၊ ခင်ဗျားတို့ ဒီဟာကို ချည်တိုင်မြဲမြဲ စိုက်ရမယ်၊ ချည်တိုင်မြဲမြဲ စိုက်နိုင်လို့ရှိရင် ခင်ဗျား ဘယ်လိုပဲဆွဲဆွဲ ကြာတော့ တိုင်ခြေလာဝပ်ကြမှာပဲ (မှန်ပါ့) ချည်တိုင်မြဲမြဲ စိုက်နိုင်လို့ရှိရင် (ချည်တိုင်လာဝပ်မှာပါပဲ ဘုရား။)
ဒါဖြင့် သားကောင်ခြောက်ကောင် အကုန်ချည်၊ ချည်ပြီး အလယ်က ထုံးပြီး သကာလ၊ ငုတ်ကြီးကြီး စိုက်ပြီး သကာလ ဒကဒကာမတွေ ဖမ်းနိုင်ကြလို့ ရှိရင်ဖြင့် တဲ့၊ သားကောင် ဆွဲရာကို ခန္ဓာက မလိုက်တော့ဘူး (မှန်ပါ့)
ကျောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်၏ ခြေရင်းမှာပဲ မောတာနဲ့ လာဝပ်ကြရမယ် (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
ဒါဖြင့် ဘာလုပ်ရမတုံးလို့ မေးလို့ရှိရင်ဖြင့် တဲ့၊ သမာဓိတည်းဟူသော တည်ကြည်မှုကို လုပ်ပါ၊ ဝိပဿနာလုပ် မယ် ကြံရင် သမာဓိတည်ကြည်မှုကို တစ်ခါတည်း တည်တည် တံ့တံ့ လုပ်ပါဆိုတော့ ဘာလုပ်ရမှာတုံး မေးလို့ရှိရင် တစ်ခုသော အာရုံကို စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်ရင် သမာဓိ ဖြစ်တယ် (မှန်ပါ့) ဈာနပစ္စယော ဆိုတာ သမာဓိကို ဟောတာ (မှန်ပါ့) ဈာနပစ္စယောဆိုတာ (သမာဓိကို ဟောတာပါ)။
သမာဓိကိုဟောတာတဲ့၊ တစ်ခုသော အာရုံကို စိုက်ထား၊ ဒီအာရုံမှ ဘယ်မှမသွားတော့ဘူး၊ စိတ်က ဒီနေရာမှာပဲ ထားနိုင် တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် တဲ့၊ ဒါ ဈာနပစ္စယော ဖြစ်ပါတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ဈာနပစ္စယော= အာရုံတစ်ခုကိုစိုက်၍ ရှုတတ်သော သဘောသည် လည်းကောင်း၊ ဒါ ဘာပစ္စည်းတဲ့တုံး (ဈာနပစ္စည်းပါ ဘုရား) ဈာနပစ္စည်းလို့ မှတ်ထားကြပါ (မှန်ပါ့)။
အဲဒါကြောင့် ဈာန်ဆိုတာသည် ဒုကာ ဒကာမတို့ မြဲမြဲ စွဲစွဲစိုက်ထူထားနိုင်တာ ဈာန်လို့ ခေါ်ပါတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
မြဲမြဲစွဲစွဲ တစ်ခုတည်းသောအာရုံကို ကိုယ့်စိတ်ကို မပြေး ရအောင်ထားတာ ဘာခေါ်ကြမယ် (ဈာန်လို့ခေါ်ပါတယ်)၊ ဈာန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့။
အာနာပါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အဲဒီတော့ အာနာပါနလုပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း၊ ကဲကွာ သတိတည်း ဟူသောကြိုးနဲ့ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ သားကောင် ခြောက်ကောင်တည်း ဟူသော စိတ်ကို၊ ထွက်သက်ဝင်သက် ချည်တိုင် ချည်ထားမယ်။
သတိတည်းဟူသော ကြိုးနဲ့ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ သားကောင်ခြောက်ကောင်နဲ့ တူတဲ့စိတ်ကို၊ ထွက်သက် ဝင်သက် ချည်တိုင်၌ ချည်ထားမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဒီသားကောင် ဒီစိတ်ဟာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ သားကောင် ခြောက်ကောင်ဟာ မပြေးပါဘူး (မပြေးပါ ဘုရား)၊ သဘောကျပလား (ကျပါပြီ)။
ဒါ့ကြောင့် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည် အာနာပါနကို ဟောတာ ဦးသံဒိုင်ရ၊ ဟောသင့် မဟောသင့် (ဟောသင့်ပါတယ် ဘုရား)၊ ဟောသင့်တယ်ဆိုတာ သဘောပါကြပလား (ပါ ပါပြီ ဘုရား)။
ကောင်းပြီ ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ ဆွဲ ရာမပါအောင်လို့ ဟောရှာတာ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ဆွဲရာ မပါအောင်လို့ဟောတော့၊ ဒကာ ဒကာမတွေ ဆွဲရာပါရင် သေခြင်းဆိုးနဲ့ နေခြင်းဆိုးလို့ ဘုန်းကြီး တစ်နေ့က ဟောထားတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)၊ ဆွဲရာပါရင် (သေခြင်း ဆိုးနဲ့ နေခြင်းဆိုးပါ ဘုရား)၊ အနေမှာလည်း ခင်ဗျားတို့ ဟိုရောက် ဒီရောက်ကြနဲ့ သဘောကျပလား (ကျပါပြီ)၊ အသေမှာလည်း ကုန်းသေရမလား၊ ရေသေရမလား၊ ကောင်းကင် သေရမလားမသိဘူး (မှန်ပါ့)။
သားကောင် ခြောက်ကောင်ဆွဲရာကို သန်ရာက ဆွဲပြီး ခင်ဗျားတို့ အငြိမ်နေခွင့်မပေးတာလည်း သားကောင် ခြောက်ကောင်၏ စွမ်းရည်သတ္တိလို့ မှတ်လိုက်စမ်းပါ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
အသေနေရာ မမြဲတာလည်း သားကောင် ခြောက်ကောင်တို့၏ ဆွဲရာကိုပါနေလို့ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မှတ်ပါ (မှန်ပါ့ ဘုရား)၊ ရှင်းပြီနော် (ရှင်းပါပြီ)။
အဲဒီတော့ ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး ရထားတဲ့ဥစ္စာ၊ သားကောင်ခြောက်ကောင် ကျောင်းဖို့ရာ ဆိုတာ မကောင်း တတ်လို့ရှိရင်လည်း အနေဆိုး အသေဆိုးပဲ (မှန်ပါ့ ဘုရား)၊
ကျောင်းတတ်လို့ရှိရင်လည်း တိုင်ခြေလာဝပ်မယ် (မှန်ပါ့)၊ ရှင်းပြီနော် (ရှင်းပါပြီ)။
မကျောင်းတတ်လို့ရှိရင် (အနေဆိုး၊ အသေဆိုးဖြစ် ပါမယ်)၊ ကျောင်းတတ်လို့ရှိရင် (တိုင်ခြေ လာဝပ်မယ်)၊
ကျောင်းတတ်လို့ရှိရင် ဘာဖြစ်ကြမယ်ထင်သလဲ (တိုင် လာဝပ်ပါမယ်)၊ တိုင်ခြေ လာဝပ်မယ် ဆိုတာ သဘောပါပလား (ပါ ပါပြီ)။
ကောင်းပြီ၊ ဒါဖြင့် ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ တိုင်ခြေဝပ်တဲ့နည်းကိုပြောမယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
တိုင်ခြေဝပ်တဲ့နည်းဆိုတာက ဥပမာမယ် ဒီဟာကျ တော့ ဦးသံဒိုင်က စိတ္တာနုပဿနာ အကောင်းဆုံးလို့မှတ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
စိတ္တာနုပဿနာဟာ (အကောင်းဆုံးပါ)၊ အကောင်းဆုံးပဲ။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် စမည့် “စက္ခုစ ပဋိစ္စ ရူပေစ ဥပ္ပဇ္ဇတိ စက္ခုဝိညာဏံ” ဆိုသဖြင့် မြင်စိတ်က ဆွဲမှာပဲ (မှန်ပါ့ ဘုရား)၊ မြင်စိတ်က စလို့ရှိရင်ဖြင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အလယ် က စမလို့၊ အလယ်က ဖောက်ပြီး စမလို့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို (မှန်ပါ့)။
အဲဒီအစကို ကျုပ်တို့က ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ ရှုပေးရ တယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)၊ မြင်တဲ့စိတ်ကို ဘာပဲမြင်မြင်၊ မြင်တဲ့ စိတ်ကို ကျုပ်တို့က ဝိပဿနာ ရှုရှုပေး (မှန်ပါ့)။
ကျုပ်တို့က ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ မြင်စိတ်က ဖြစ် ပျက် သူ့နောက်က မဂ် ဆိုသဖြင့် ဖဿ ပစ္စယာ ဝေဒနာထိ အောင်တော့ လာပါသေးတယ် (မှန်ပါ့)။
ဘာ့ကြောင့် ဝေဒနာထိအောင် လာသတုံးလို့ မေးလို့ရှိ ရင်ဖြင့်၊ ဒါသဘော ကလေးလည်း နည်းနည်း မှတ်လိုက်တာပေါ့ (မှန်ပါ့)၊ မြင်တယ် တွေ့ထိတယ် ဆိုတဲ့ ဖဿနဲ့ ခံစားတယ် ဆိုတဲ့ ဝေဒနာကတော့ မောင်သစ်တို့မှတ်၊ ဦးသံဒိုင်တို့မှတ်၊ တစ်ပြိုင်နက် ပေါ်တယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)၊ သဘောကျပလား (ကျပါပြီ)။
ဖဿနဲ့ ဝေဒနာ တစ်ပြိုင်နက်ပေါ်တယ်
မြင်တဲ့စိတ်ရယ်၊ တွေ့ထိတဲ့ဖဿရယ်၊ ခံစားတဲ့ဝေဒနာ ရယ်ကတော့ (တစ်ပြိုင်နက် ပေါ်ပါတယ် ဘုရား)။
တစ်ပြိုင်နက် ပေါ်တယ်၊ အဲ့ဒီ ဝေဒနာနောက်ကနေပြီး သကာလ တဏှာမလိုက်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ တဲ့၊ တိုင်ခြေ ကိုယ့်သန္တာန်မှာ မြင်စိတ်ကလေး မြွေကဆွဲပြီ၊ ဆွဲပင် ဆွဲငြား သော်လည်း သူ့ကိုပဲ ကျုပ်တို့က မင်း အနိစ္စပဲ၊ မင်းအနိစ္စ ပဲ၊ မြင်စိတ်အနိစ္စပဲ ဆိုတော့၊ ဝေဒနာ နောက်က မဂ္ဂက လိုက်ပြီး သကာလနေတော့၊ မဂ်နဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့ အတွက် မြင်ကာမျှမတ္တ သွားဖြစ်တယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)၊ ရှင်းပြီနော် (ရှင်းပါပြီ)။
ဘာဖြစ်သွားသလဲ (မြင်ကာမျှမတ္တ ဖြစ်သွားပါ တယ်)၊ မြင်ကာမျှမတ္တ ဖြစ်သွားတော့ကိုတဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေ က မှတ်ရမှာက မြင်လို့ စွဲလမ်းတဲ့တဏှာက မလာဘူး (မှန်ပါ့)၊ မြင်လို့ခင်တာ မလာဘူး၊ မြင်လို့စွဲလမ်းတာ မလာဘူး (မှန်ပါ့)၊ မြင်လို့ အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ ကံကော (မလာ ပါ ဘုရား)။
အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ တိုင်ခြေအဝပ်ခိုင်းလို့ရ တာ (မှန်ပါ့)၊ ကဲ မင်းဆွဲရာမလိုက်ဘူး ဆိုပြီး သကာလ၊ သူ့ ကို မနောဒွါရတည်းဟူသောတိုင်မှာ မင်းနေရမယ် (မှန်ပါ့)၊ ဝိပဿနာကို မနောဒွါရနဲ့ ရှုရမှာကိုး (မှန်ပါ့)။
ဝိပဿနာကို မနောဒွါရနဲ့ရှုလိုက်တော့ မနောဒွါရ တိုင် ခြေမှာ သူလာပြီးဝပ်တာပဲ (မှန်ပါ့)၊ သဘောပါပလား (ပါ ပါပြီ)။
ဒါဖြင့် မြင်စိတ် ဖြစ်ပျက်ရှုလို့ရှိရင်ဖြင့် တဏှာလိုက် မလိုက် (မလိုက်ပါ ဘုရား)၊ သဘောကျပလား (ကျပါပြီ)
ဒါဖြင့် တဏှာချုပ်၊ ဥပါဒါန်ချုပ်၊ ကံချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် တဲ့၊ ခင်ဗျားတို့သားကောင်သည်၊ ခင်ဗျားတို့က ကိုင်ခြေမှာ အဝပ်ခိုင်းတဲ့သတ္တိကြောင့်၊ ခင်ဗျားတို့ကို အနေဆိုးလည်း မပေး တော့ဘူး (မှန်ပါ့ ဘုရား) အသေဆိုးလည်း (မပေးပါ ဘုရား)။
ဘာဖြစ်လို့တုံး၊ တိုင်ခြေမှာ သူ့ဖမ်းတယ် (မှန်ပါ့) မနောဒွါရတိုင်လို့ မှတ်လိုက်စမ်းပါ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ဘယ်လိုမှတ်ကြမယ် (မနောဒွါရတိုင်ခြေမှာ ဖမ်းပါတယ်) မနောဒွါရအောက်မှာ သူ့ကို ရောက်အောင်လုပ် ပေးရမယ် (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
ဘယ်ရောက်အောင် လုပ်ရမလဲ (မနောဒွါရရောက်အောင် လုပ်ရပါမယ်)။
မနောဒွါရဆိုတာ ဝိပဿနာဉာဏ်က မနောဒွါရမှာ သာဖြစ်တာကိုး (မှန်ပါ့ ဘုရား) ဒီပြင်ဒွါရမှာ မဖြစ်ဘူး (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
အဲဒီ မနောနဲ့ တစ်ခါတည်း မြင်တယ်ဆိုသဖြင့် ဘာပဲ မြင်မြင် မြင်စိတ်ဖြစ်ပျက်ရှုပါ (မှန်ပါ့) မြင်စိတ် ဖြစ်ပျက်ရှု ဆိုတော့ မနောဒွါရတည်း ဟူသော တိုင်ခြေမှာ သူဟာ ဝပ်နေတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ရောက်တယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) သူဆွဲရာ ဒကာ ဒကာမတွေက ပါသေးရဲ့လား (မပါပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် မြွေကိုနိုင်ပြီ၊ မြွေကိုနိုင်ပြီ၊ တိုင်ခြေမှာ ကြိုး ခြောက်ချောင်းနဲ့ စုချည်ပြီး စုတုပ်ပြီး ငုတ်စိုက်ပြီး သကာလ ထားတဲ့အတွက် သားကောင် ခြောက်ကောင်နဲ့တူတဲ့ စက္ခု၊ သောတ၊ ဃာန၊ ဇိဝှာ၊ ကာယ၊ မန၊ ဒီမနတွေသည် ဒကာ ဒကာမတွေ၏ သန္တာန်၌ ဝိပဿနာအရှုခံ လာဖြစ်ရတယ် (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
ဘာလာဖြစ်ရသလဲ (ဝိပဿနာအရှုခံ လာဖြစ်ရပါတယ်)
ဝိပဿနာအရှုခံ လာဖြစ်တဲ့ အတွက်-တဲ့၊ သူတို့နဲ့ သူ့ရှုစရာ မရှိရင်လဲ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် မပြတ်ဘူး (မှန်ပါ့ ဘုရား) သူ့ရှုစရာရှိမှလဲ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်က ပြတ်တယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်ရင် နိဗ္ဗာန်ပဲ (မှန်ပါ့)။
ဒါကြောင့် နေ့လည်က ဟောတယ်၊ ရာဂက္ခယော ဖြစ် သွားတာပဲ (မှန်ပါ့)၊ ရာဂက္ခယော ဖြစ်သွားတယ် ဆိုရင် ဒေါသက္ခယောလည်း ဖြစ်ပါတယ် (မှန်ပါ့)၊ မောဟက္ခယော ကော (ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား)၊ ရာဂလည်းကုန်၊ ဒေါသလည်း ကုန်၊ မောဟလည်းကုန် အဲဒါဘာခေါ်ကြမလဲ (နိဗ္ဗာန်ပါ ဘုရား)၊ နိဗ္ဗာန်လို့ နေ့လည်က ဟောခဲ့တယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ဪ ဒါဖြင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ပြတ်တာကို နိဗ္ဗာန်လို့ ခေါ်တာကိုး (မှန်ပါ့)၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ နိဗ္ဗာန်နဲ့ ဟပ်ကြည့် တော့ ဦးသံဒိုင် ပေါ်မလာဘူးလား (ပေါ်လာပါတယ် ဘုရား)။
သူပြတ်တာ ဘာခေါ်မယ် (နိဗ္ဗာန်ခေါ်ပါတယ် ဘုရား)။ သူပြတ်တာ နိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတော့၊ နိဗ္ဗာန်ဆို တာ တခြားလား မှတ်နေတယ်၊ နေ့လည်က ပြောသလိုပေါ့ လေ။ အင်း ဟင် ၂ ကနေ ၃ မကူးတာဟာ အမှန်ပဲ (မှန်ပါ့ ဘုရား)၊ (စက်ဝိုင်းကြည့်ပါ) ၂-ကနေ ၃-မကူးတာ (နိဗ္ဗာန်ပါ ဘုရား) ရှင်းပလား (နိဗ္ဗာန်ပါ ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟကုန်တာ နိဗ္ဗာန်
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဘာတုံး အောက်မေ့နေတယ်၊ ရာဂ ဒေါသ မောဟ ကုန်တာကို နိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) ဘယ့်နှယ်ကြောင့် နိဗ္ဗာန်မှာ ရာဂဒေါသ မောဟကုန်ပါလိမ့် မတုံးလို့ မေးတဲ့ အခါကျတော့ မြင်စိတ်က ဖြစ်ပျက်၊ မြင်စိတ် ဖဿဝေဒနာ တစ်ပြိုင်နက် ပေါ်လာတယ်၊ ဝေဒနာ့ နောက်က ရှုတာက မဂ်ဖြစ်ပြီး သကာလ မဂ်ကနေပြီး ရာဂဖြတ်ချလိုက် တယ် (မှန်ပါ့) ရာဂဖြတ်ချလိုက်တော့ သူနဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်တဲ့ မောဟကလည်း ပြတ်တယ် (ပြတ်ပါတယ်)။
သူရှိမှ အခုကောင်းတာဟာ နောက်မကောင်းတဲ့ ဒေါသဖြစ်မည့်ဥစ္စာ ဆိုပြတ်တယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) မပြတ်ဘူး လား (ပြတ်ပါတယ် ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒီဒကာ ဒကာမတွေသည် မြင်စိတ် ဖြစ်ပျက် ရှု ပါ၊ စက္ခုဝိညာဏံ အနိစ္စ- ဆိုတဲ့ ပါဠိတော်ဟာ မြွေဆွဲရာ မပါအောင်လို့ ဟောတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပဲဆိုတာ ယနေ့ည ရှင်းသွားလိမ့်မယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် မြင်တယ်ဆိုရင် မြင်စိတ်ဘာလုပ်ကြမယ် (ဖြစ်ပျက် ရှုရပါမယ်) ဖြစ်ပျက် ရှုလိုက်တဲ့ အတွက် စိတ်တွင် ဖြစ်ပျက်ဖြစ်သွားသလား ဆိုတော့၊ သူနဲ့ သဟဇာတဖြစ်တဲ့ နာမက္ခန္ဒာ လေးပါးလုံး ဝေဒနာရော၊ သညာရော၊ ဖဿရော၊ ဦးသံဒိုင် ဘာဖြစ်သွားသတုံး (ဖြစ်ပျက်ဖြစ်သွားပါတယ်) အကုန် ဖြစ်ပျက် ဖြစ်သွားတယ် (မှန်ပါ့) နဂိုက တွဲဖြစ်တာကိုး။
တွဲဖြစ်တော့ အားလုံးသည်ကားလို့ ဆိုရင် အနိစ္စချည့် သွားဖြစ်တယ် (မှန်ပါ့) သဘော ကျပလား (ကျပါပြီ) အဲဒီ အနိစ္စချည်း သွားဖြစ်ပြီး သကာလ နေတော့၊ အနိစ္စနောက်က နေပြီး သကာလ ဖြစ်ပျက်ရှုတဲ့မဂ်က လိုက်ပြီး သကာလ လာပြန်တော့၊ ဒီမဂ်ဘာဖြစ်သတုံးလို့ မေးတဲ့အခါ ဒီမဂ်က နောက် တဏှာ ဝတ္ထုကို မကြိုက်၊ ဥပါဒါန်ကို မဖြစ်စေ၊ ကံကိုမဖြစ်စေ ဆိုတော့ တဏှာရော ဥပါဒါန်ရော ကံရော ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) သဘောပါကြပလား (ပါ-ပါပြီ) ဘာဖြတ်လိုက်ပါလိမ့် (တဏှာရော၊ ဥပါဒါန်ရော၊ ကံရော ဖြတ်ပါတယ်)။
မဂ်သည် တဏှာဖြတ်၊ ဥပါဒါနံဖြတ်
ဒါဖြင့် ခင်ဗျားတို့ကို အပါယ်ပို့မည့် တဏှာ၊ အပါယ်ပို့ မည့်ဥပါဒါန်၊ အပါယ်ပို့မည့် ကံတွေကို ခင်ဗျားတို့ မြင်စိတ် ဖြစ်ပျက် ရှုတဲ့မဂ်သည် တဏှာလဲ ဖြတ်တယ်၊ ဥပါဒါန်လဲ ဖြတ်တယ်၊ ကံလဲ ဖြတ်တယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ် (မှန်ပါ) မရဘူးလား (ရပါတယ် ဘုရား)။
အဲဒီတော့ ဒါ တိုင်ခြေမှာ ဝပ်အောင် လုပ်နိုင်လို့ပဲ (မှန်ပါ့ ဘုရား) ဒီသားကောင်တွေကို (တိုင်ခြေမှာ ဝပ်အောင် လုပ်နိုင်လို့ပါ)။
မနောအောက်ကို အရောက် သွင်းပေးတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) မနောဒွါရ ဝိပဿနာ ဉာဏ်အောက်ကို အရောက် သွင်းစေလိုက်တဲ့ အတွက် သူကဆွဲမလို့ စတာပဲ (မှန်ပါ့) ဆွဲမလို့စတာကို ကျုပ်တို့က မောင်သစ်တို့ ဦးသံဒိုင်တို့က အစဖြတ်ချလိုက်တယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ဘာဖြတ်လိုက်သလဲ (အစ ဖြတ်ချလိုက်ပါတယ်) အဲ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အစကဖြတ်ချလိုက်တယ် (မှန်ပါ့) စက္ခုဝိညာဏ်ကမှစပြီး မြင်စိတ်ကမှ စပြီးသကာလ မြင်တယ်၊ ခံစားတယ်၊ လိုချင်တယ်၊ စွဲလမ်းတယ်၊ အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို အစဖြတ်ပစ်လိုက်တယ် (မှန်ပါ့) သဘော ကျပလား (ကျပါပြီ)။
ဒါဖြင့် ‘‘ယတော ပစ္စယာနံ ခယံ အဝေဒီ’’ ယတော- အကြင်အခါမှ၊ ပစ္စယာနံ- အဝိဇ္ဇာစသော အကြောင်းတို့၏။ ခယံ- ကုန်ရာဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်ကို၊ အဝေဒီ- ငါသိပြီကွ၊ ဖြစ်ကြောင်း ကုန်တာကို ငါသိပြီ (မှန်ပါ) သဘောကျပလား (ကျပါပြီ)။
ဖြစ်ကြောင်းကုန်တာကို ငါသိပြီဆိုတော့ ဒကာ ဒကာမ တွေက အနည်းငယ် ရှုပ်ချင် ရှုပ်နေဦးမယ်၊ ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာ အဝိဇ္ဇာကကို မစဘူး (မှန်ပါ) မြင်စိတ်က စတယ် (မှန်ပါ့) အဲဒီ ဖြစ်ကြောင်းကို သူသိတဲ့ အတွက်အင်း မျက်လုံး စိတ်ဆိုတဲ့ မြွေကတော့ဖြင့် ဆွဲတော့မှာပဲ (မှန်ပါ)။
အဆွဲမခံဘူးကွ ဆိုပြီးသကာလ သူ့ကို မင်းလာလို့ရှိရင် ငါ သံသရာထဲ နစ်မွန်းတော့မယ်၊ အပါယ် လေးပါးထဲ ငါရောက်ရတော့မယ်၊ ရောက်ကြတော့မယ် ဆိုတာကို သိနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ပေါ်လာလို့ရှိရင် သူ့ပဲ ဖြစ်ပျက်ရှုချလိုက်တယ် (မှန်ပါ့)
သူအနိစ္စပဲ၊ သူအနိစ္စပဲဆိုပြီးသကာလ ဦးသံဒိုင် ရှုလိုက်တဲ့ အခါကျတော့၊ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး သည်၊ ‘‘ယတော ပစ္စယာနံ ခယံ အဝေဒီ’’ အင်း သူ ကုန်ရင် ဟိုဘက်က ဟာတွေ အကုန်- ကုန်မှာပဲလို့ သူသိတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
မြင်စိတ်ကလေးကို နို့ ဖြစ်ပျက် ရှုနိုင်လို့ရှိရင် တဏှာဥပါဒါန် ကံကုန်တယ်ဆိုတာ ငါသိတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) ငါ အဲဒီလိုသိတယ်၊ သိပြီး သကာလ သိတဲ့အတိုင်း ငါ အလုပ် လုပ်လိုက်လို့ ငါ ဘုရား ဖြစ်လာတာ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ချုပ်နိုင်လို့ ဘုရားဖြစ်တာ
ဒီလိုဆိုတော့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် စပြီး သကာလ ဖြစ်တဲ့ တရား ချုပ်နိုင်အောင်လို့ ဘုရား ဖြစ်လာတာ (မှန်ပါ့ ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စတဲ့ တရားကို ချုပ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ဘာဖြစ်သလဲ (ဘုရားဖြစ်ပါတယ်) အဲဒီတော့ ဘုရားဖြစ်တာနဲ့ ခင်ဗျားတို့ သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာ ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဘာမှမထူးဘူး အောက်မေ့ (မှန်ပါ့ ဘုရား) ထူးသေးရဲ့ လား (မထူးပါ ဘူး ဘုရား)။
ဘုရားလည်း လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ချုပ်ငြိမ်းလို့ ဘုရားဖြစ်တာပဲ (မှန်ပါ့) ခင်ဗျားတို့လဲ ဒီဟာ ချုပ်ငြိမ်းအောင် လုပ်လို့ရှိရင် ကိုယ့်အတန်းနဲ့ကိုယ် သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာ ဖြစ်ရမှာပဲ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ဘာမှ ခင်ဗျားတို့ ယုံမှားသံသယ ရှိမနေနဲ့ ဪ ဘုရားဖြစ်စဉ်က ဘယ်လို ဆိုတော့ ဘုရားက အခု သေသေ ချာချာ သူဖွင့်ပြောပြီကော၊
ယဒါ ဟဝေ ပါတု ဘဝန္တိ ဓမ္မာ၊
ငါ့သန္တာန် ပေါ်လာတယ်၊ ငါ့စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာတာတဲ့၊
အာတာပိနော ဈာယတော ဗြဟ္မဏဿ
ဝိပဿနာရှုတဲ့ ငါဘုရားအားတဲ့ အာတာပိနော ဈာယတော ဗြဟ္မဏဿ ဆိုတာ ဈာယတောက ရှုတာ၊ ဗြဟ္မဏဿက မကောင်းမှုမှ အပပြုတဲ့ တရား။
ငါသည် ဝိပဿနာရှုတယ်၊ ရှုလိုက်တဲ့အခါ ကျတော့
ယတော ခယံ ပစ္စယာနံ အဝေဒိ။
ပစ္စယာန-ံ အကြောင်းတို့၏ ခယံ- ကုန်ရာကို၊ အဝေဒီ- ငါသိတယ် တဲ့။
တဏှာ-ဥပါဒါန်၊ ကံဆိုတဲ့အကြောင်း ကုန်ရာကို ငါသိ တယ်တဲ့၊ ဘာသိသတုံး မေးတဲ့အခါ၊ ငါ စက္ခုမျက်စိ ဖြစ်ပျက် ရှုလိုက်တယ် (မှန်ပါ့)။
ဖြစ်ပျက် ရှုလိုက်တော့ တဏှာ၊ ဥပါဒါန်၊ ကံအကြောင်း ကုန်တာ ငါသိတယ်၊ ဒါကြောင့် ငါဘုရား ဖြစ်သွားတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ဒီအဓိပ္ပာယ်ကို ဒီလိုမယူကြလို့ ခက်နေတာ ဦးသံဒိုင် (မှန်ပါ့) ခင်ဗျားတို့ကတော့ ဘုရား အနေကဇာ တင်တယ်လို့ မှတ်နေတာပဲ (မှန်ပါ့)။
စင်စစ်မဟုတ်ဘူး ၊ဖြစ်စတရားကို ကုန်အောင်လုပ်ကွ-တဲ့၊ (မှန်ပါ့) ပေါ်ပလား (ပေါ်ပါပြီ) ဘာတဲ့တုံး (ဖြစ်စတရားကို ကုန်အောင်လုပ်ရပါမယ်)။
ဒီနေရာ မျက်လုံးပေါ်မှာ ဘာတုံး၊ မြင်စိတ်ကမှ မစရင် ဘယ်ကစမလဲ (မှန်ပါ့) ကြားစိတ်ကမှ မစရင် (မရပါ ဘုရား)။
ကြားစိတ်ကပဲ စရမယ်၊ နံစိတ်ကစရမယ်၊ နံစိတ်က စရမယ်၊ စားစိတ်ကစရမယ် ဟုတ်လား (မှန်ပါ့) ယားစိတ်ယံစိတ်၊ နာစိတ်၊ ကောင်းစိတ်က စရမယ်၊ ကြံစိတ်၊ စည်စိတ်ကစရမယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)
ဒါ-ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အစပဲ (မှန်ပါ့)။
အဲဒီ အစတွေကို ကုန်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ငါသည် ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်လာ ပါတယ်ကွာ တဲ့ ဆိုတော့၊ သူတိုင်ခြေဝပ်အောင် လုပ်နိုင်လို့ မနောဒွါရ ဆိုတဲ့ တိုင်ခြေမှာ မြင်စိတ်၊ ကြားစိတ် အစရှိတဲ့ ကြောက်စိတ်တွေ လာပြီးသကာလ မင်းတို့ဆွဲရာ ငါမပါဘူး၊ မင်းတို့ ဒီနေရာမှာ ဝပ်ပြီးသကာလ မင်းတို့မေးပြီ၊ မင်းတို့ဝပ်ပြီး သကာလ ဒီနေရာမှာ အရှုခံအဖြစ်နဲ့ နေရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့၊ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး သိလာလို့ ရှုပြီးသကာလ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ကုန်ရာကို သိသွားတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
ကုန်ရာသိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာက တခြားလို့ မှတ်မနေကြပါ နဲ့တဲ့၊ အစဖြတ်လိုက်ရင် ဟိုဘက်က အကုန် ကုန်တယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) အစဖြစ်ပျက်ရှုလိုက်ရင် (ဟိုဘက်က အကုန် ကုန်ပါတယ် ဘုရား) မြင်စိတ်ဖြစ်ပျက် ရှုလိုက်တော့ တဏှာ၊ ဥပါဒါန်၊ ကံ ကဲ မောင်သစ် လာသေးသလား (မလာ ပါ ဘုရား) အဲ အစ၏ ကုန်ရာကိုသိတယ် (မှန်ပါ့) မကုန်ဘဲနဲ့နေလို့ ဒီအစကို ထောင်လာမယ် ဆိုလို့ ရှိရင်လဲ အပါယ်လည်း သွားဖို့ရှိတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် တဏှာ၊ ဥပါဒါန်၊ ကံ၊ ဖြစ်လာတော့ ဇာတိကျ တော့ ဦးသံဒိုင်က ငြင်းလို့ရဦးမလား (မရပါ ဘုရား) မရဘူး တဲ့၊ ကမ္မဘဝပစ္စယာ ဇာတိပဲ (မှန်ပါ့) ကမ္မံသတ္တေ ဝိဘဇ္ဇတိ (မှန်ပါ့) မလာသေးဘူးလား (လာပါတယ် ဘုရား) ဒါဖြင့် ဘာဖြစ်ရမတုံးတဲ့၊ ဒီပေါ်တာ ဖြတ်မလား အစဖြတ်ကြမလား (အစဖြတ်ရပါမယ် ဘုရား)။
အစဖြတ်လို့ရှိရင်ဖြင့် ခင်ဗျားတို့ မျက်လုံးမှာ ဘယ်က စတုံး၊ မြင်စိတ်ကစတယ် (မှန်ပါ့) နားမှာ ဘယ်ကစသတုံး (ကြားစိတ်ကစပါတယ်) အဲဒီအစဖြတ်ပစ်ရမယ် (မှန်ပါ့) သဘောပါလား (ပါ-ပါတယ်)။
ကြံစိတ်လာတယ်ဆိုရင် ကြံစိတ်ကစဖြတ် (မှန်ပါ့) ကြံပြီးသကာလ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ့်အကြံကလေးကို သဘော ကျတာ ကိုယ့်အကြံကလေးကို မမေ့အောင် စွဲလမ်းနေတာ ကိုယ့်အကြံကလေး အတိုင်း နောက်ထပ် အားထုတ်မယ် ဆိုတာတွေကလဲ မနောဒွါရကလဲ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် မလာပေဘူးလား (လာပါတယ် ဘုရား)။
ထိုကဲ့သို့ လာခဲ့သည်ရှိသော်၊ ခင်ဗျားတို့ ကြံမှုသည် ကြံစ စိတ်ကို ဖြစ်ပျက် မရှုတော့ပါဘူး ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် တဲ့။ ကြံလေ အပါယ်ရောက်လေပ် (မှန်ပါ့) ဆိုထိုက်- မဆိုထိုက် (ဆိုထိုက်ပါတယ် ဘုရား)။
ကြံတာကတခြား ကြံတာမှမဟုတ်ဘဲကိုး၊ စီးပွားရေး ကြီးပွားရေး ကြံတာကိုး (မှန်ပါ့) ကဲ ဒါဖြင့် သဘော ပါကြပလား (ပါ-ပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဘယ်နှစ်စိတ်ကို ရှုရမှာတုံး (ခြောက်စိတ်ကို ရှုရမှာပါ ဘုရား) ခြောက်စိတ် ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ တိုတိုပြောရင် ခြောက်စိတ်ပဲရှိပါတယ် (မှန်ပါ့) မြင်စိတ်၊ ကြားစိတ်၊ နံစိတ်၊ စားစိတ်၊ ဟုတ်လား (မှန်ပါ့) ယားစိတ် ယံစိတ်၊ နာစိတ်၊ ကြံစိတ်၊ ဒီစိတ်တွေကို ခင်ဗျားတို့ နိုင်ကြမယ် ဆိုလို့ရှိရင်၊ ဖြစ်ပျက်လာတိုင်း ရှုနိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၊ ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ် အစက ပြတ်ပါတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ဘယ်က ပြတ်သလဲ (အစကပြတ်ပါတယ် ဘုရား) အစက ပြတ်တယ်ဆိုကတည်းက ဒကာ ဒကာမတို့ သိတဲ့အတိုင်း တဲ့ အစက ပြတ်သွားတယ် ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်၊ ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ ၏ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကံတွေဟာ လာပါဆိုလို့လဲ မလာတော့ပါဘူး၊ (မလာပါ ဘုရား) လာနိုင်သေးရဲ့ လား (မလာနိုင်ပါ ဘုရား) မလာနိုင်ဘူးတဲ့၊ အကယ်၍ ခင်ဗျားတို့ အစက မပြတ် ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်၊ ဖဿ၊ ဝေဒနာ၊ တဏှာ၊ ဥပါဒါန်၊ ကံဆိုတာ မလာပေဘူးလား (လာပါတယ် ဘုရား)။
အဲဒီတော့ကိုတဲ့၊ ယနေ့ည ပြောစရာက ခင်ဗျားတို့ မြဲမြဲမှတ်ထားပါ၊ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော် မြတ်ကြီးက ကံနဲ့ တဏှာကို ထူးခြားတာ ပြောလိမ့်မယ် (မှန်ပါ့)။
ကံနဲ့တဏှာ ထူးခြားတာပြောလိမ့်မယ် (မှန်ပါ့) ကံဟာ နောက်ကမဟုတ်လား၊ တဏှာက ရှေ့က၊ တဏှာဥပါဒါန် ကံကို (မှန်ပါ့) တဏှာက ဘာတုံး (ရှေ့ကပါ) ကံက (နောက်ကပါ ဘုရား)။
ကောင်းပြီ၊ တဏှာမလာရင် ကံမလာပါဘူး (မှန်ပါ့) လာနိုင်ပါ့မလား (မလာနိုင်ပါ ဘုရား) တဏှာမလာရင် (ကံမလာပါ ဘုရား)။
ကောင်းပြီ တဏှာမလာရင်ကံမလာဘူး၊ တဏှာလာ ရင် (ကံလာပါတယ်) ကံလာမယ် ဆိုတာကော သေချာကြ ပလား (သေချာပါပြီ)။
အဲဒီတော့ ဒီလိုမှတ်ထားကြပါတဲ့၊ ဒါကြောင့် တဏှာကို သမုဒယသစ္စာဖွဲ့တာ (မှန်ပါ့) တဏှာကို ဘာသစ္စာဖွဲ့ပါ လိမ့်၊ (တဏှာကို သမုဒယ သစ္စာဖွဲ့ပါတယ် ဘုရား)။
သမုဒယသစ္စာဖွဲ့ တယ်၊ ဖွဲ့မှာပဲ၊ ဘယ့်နှယ်ကြောင့် ဖွဲ့ရသတုံးမေးတော့ တဏှာ မရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ကြည့်-နေ့လယ်က ရွတ်တဲ့ပါဠိမှာ ရာဂက္ခယော ဒေါသက္ခယော မောဟက္ခယော ဣဒံ ဝုစ္စတိ ဘိက္ခဝေ နိဗ္ဗာနံ ရာဂ ဒေါသ မောဟကုန်ရင် နိဗ္ဗာန်ပဲကွ (မှန်ပါ့) မဟောဘူးလား (ဟောပါတယ် ဘုရား)။
ဒါဖြင့် တဏှာချုပ်ရင် နိဗ္ဗာန်ခေါ်တာပဲ (မှန်ပါ့) ကံ ချုပ်လို့ နိဗ္ဗာန်မခေါ်ဘူး (မခေါ်ပါ ဘုရား) သဘောကျပလား (ကျပါပြီ)။
ကိုင်း ဒါဖြင့် ဒါကလေး ရှင်းပြပါမယ်၊ ဒကာ ဒကာမ တို့ တဏှာဟာ ဘာလုပ်တတ်သတုံး၊ ဘုရားက အင်္ဂုတ္တိုရ် ပါဠိတော်ကျတော့ တဏှာဟာ အပ်ချုပ်သမားနဲ့ တူတယ်လို့ ဟောတယ် (မှန်ပါ့)။
အပ်ချုပ်သမားဟာ ဘာလုပ်တတ်သတုံး၊ အပ်ချုပ် သမားဟာ အဝတ်နှစ်ထည် ကွဲပြီး နေစေကာမူ စပ်တတ်တယ် (မှန်ပါ့) အဝတ်နှစ်ထည်ပြတ်ပြီး နေစေကာမူ (စပ်တတ်ပါတယ် ဘုရား)။
ထို့အတူပဲတဲ့၊ တဏှာရှိမှ ဟိုဘဝဒီဘဝဆက်တာ (မှန်ပါ့) တဏှာမရှိလို့ရှိရင် (မဆက်ပါ ဘုရား)။
တဏှာရှိမှ ဟိုဘ၀ ဒီဘဝဆက်
ဒါဖြင့် ခင်ဗျားတို့က ဪ ကံက ဆက်ပေးတယ် လို့ ထင်ချင်ထင်နေတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) သဘောကျပလား (ကျပါပြီ)။
ဒါဖြင့် တဏှာအပ်ချုပ်သမားနဲ့တူတယ်လို့ အင်္ဂုတ္တိုရ် ပါဠိ တော်ကြီးမှာ ဟောထားတယ် (မှန်ပါ့) တဏှာသည် ဆက်တတ်တယ် (မှန်ပါ့) တဏှာသည် ဘာတုံး (ဆက်တတ်ပါတယ် ဘုရား)။
ဟိုဘ၀ ဒီဘဝကံလေ (ဆက်တတ်ပါတယ် ဘုရား) ဆက်တတ်တယ် တဲ့၊ ဘယ်လောက် ဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့၊ တဏှာဆက်တယ် မဆက်တယ် ကို၊ ကိုယ့်သမီးတစ်ယောက်နဲ့ တခြားသောသားနဲ့ အိမ်ထောင် ကျတယ်နော် (မှန်ပါ့)။
ဒီအမေအဖေ ယောက္ခမ မိဘလုပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က တဏှာ ဘယ်လိုဆက်သတုံး ဆိုလို့ရှိရင်၊ ပထမသမီးနဲ့ သားမက်နဲ့ ဆက်လိုက်တာလဲ တဏှာပဲ (မှန်ပါ့ ဘုရား) သားမက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သားမက်၏ ညီတွေ အစ်ကိုတွေကိုလဲ ခင်မင်ရ တာပဲ (မှန်ပါ့ ဘုရား) ဘယ်သူတုံး ဒါ (တဏှာပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် သူအပ်ချုပ်သမားတွေလို သွားမှာပဲ (မှန်ပါ့) ရိပ်မိပလား (ရိပ်မိပါပြီ) ဘာလုပ်တတ်သတုံး (အပ်ချုပ် သမားတွေလို ဆက်စပ်သွားတတ်ပါတယ်) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ) ဒါဖြင့် ဘုံဘဝတွေ ဆက်သွားတာလဲ ဘယ်သူလို့ ထင်သတုံး (တဏှာပါ ဘုရား)။
ဪ တဏှာပဲ ထင်တယ်နော် မှန်ပါတယ် တဲ့ ‘‘တဏှာ သိဗ္ဗိနီ’’ လို့ ဟောတယ်၊ တဏှာ- တဏှာသည်။ သိဗ္ဗိနီ- အပ်ချုပ်သမားနဲ့တူ၏ (မှန်ပါ့)။
အပ်ချုပ်သမားသည် ဘာတုံး၊ အထည်တစ်ခုနဲ့ အထည်တစ်ခုကို ဆက်စပ်တတ်လို့ အပ်ချုပ်သမားလို့ ဆိုကြဘိ သကဲ့သို့၊ တဏှာသည် ရှေးဦးစွာ သမီးခင်တယ်၊ သမီးခင်လို့ ရှိရင်တော့ သားမက် ခင်ရတော့မှာပဲ (မှန်ပါ့)။
အင်း ဟင် သူက မွေးဖွားတဲ့ သားသမီးလေး တွေကော (ခင်ပါတယ် ဘုရား) သားမက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေကော (ခင်ပါတယ် ဘုရား) သားမက်နဲ့ခင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကော (ခင်ပါတယ် ဘုရား)။
ဘယ်သူက ဆက်စပ်သွားတာတုံး (တဏှာက ဆက်စပ်သွားတာပါ ဘုရား) ဒါဖြင့် အပ်ချုပ်သမားနဲ့ တူ-မတူ (တူပါတယ် ဘုရား)။
ဒါဖြင့် မစလေနဲ့၊ စရင်ခက်မယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) ဆက်တော့မှာပဲ၊ အကုန်ရှောက်ချုပ်မှာပဲ (မှန်ပါ့) ဟိုဟာ လဲမကင်းဘူး၊ ဒီဟာလဲမကောင်းဘူး၊ ဒီဟာလဲပစ်ထားလို့ မတော်ဘူး၊ ဒီဟာလဲ ဒီအတိုင်း နေလို့မတော်ဘူး (မှန်ပါ့)။
ဦးသံဒိုင် ဘယ်သူ့သတ္တိတွေ ထင်နေသတုံး (တဏှာ သတ္တိတွေပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် အဲဒီပစ္စုပ္ပန်မှာ ဆက်တာမြင်သဖြင့် ဟိုဘဝ ဒီဘဝဆက်တာလဲ ဘယ်သူထင်ကြသလဲ (တဏှာပါ ဘုရား) တဏှာပဲ (မှန်ပါ့) ရိပ်မိပလား (ရိပ်မိပါပြီ)။
အဲဒါ ခင်ဗျားတို့က ဗြုန်းခနဲ တွေးလိုက်တဲ့အခါ ကျတော့ ကံကဆက်ပေးတာလို့ ဒီလို ထင်ကြတယ် (မှန်ပါ့)
ကံနဲ့ ပဋိသန္ဓေနဲ့နီးတယ် (မှန်ပါ့)။
နီးတော့ နီးတာအမှန်ပဲ၊ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ် ကြီးက နီးတော့ နီးပါတယ် တဲ့၊ နီးပင် နီးငြားသော်လဲ တဏှာခ ျုပ်ငြိမ်းတဲ့ လူတော့ မဆက်ဘူးတဲ့ (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား – (ရှင်းပါပြီ) တဏှာ ချုပ်ငြိမ်းတဲ့ လူကျတော့ (မဆက် ပါ ဘုရား)။
တဏှာချုပ်ငြိမ်းတဲ့ လူကျတော့ ကံမှမလာဘဲ (မှန်ပါ့) လာနိုင်သေးရဲ့လား (မလာနိုင်ပါ ဘုရား) မလာနိုင်တော့ အဆက်သမား စင်စစ် အရင်းကျကျ ပင်ရင်း တွေးမယ်ဆို လို့ရှိရင် ကံကို မဆိုကြပါနဲ့ (မှန်ပါ့) ဘာကို ဆိုရမလဲ (တဏှာသာဆိုရပါမယ် ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
သားမက်နဲ့စပ်တဲ့ ဥပမာလဲ ပြောခဲ့ပါပြီ၊ ခင်ဗျားတို့ကို သားမက်နဲ့ စပ်တာတွေ ဟူသရွေ့ဟာ အကုန်ခင်ရမှာ၊ ကြင်ရမှာ ချည့်ပဲ (မှန်ပါ့) ဘယ်သူက ဆက်စပ်သွားတာတုံး (တဏှာက ဆက်စပ် သွားတာပါ) တဏှာက ဆက်စပ်သွား တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာ ရိပ်မိကြပလား (ရိပ်မိပါပြီ)။
ဒါဖြင့် တဏှာဟာ အပ်ချုပ်သမားနဲ့ တူမတူ (တူ ပါတယ် ဘုရား) ဒါဖြင့် သူမသေသရွေ့ ကာလပတ်လုံး တစ်ဆက်တည်းဆက်ပေးနေမှာပဲ (မှန်ပါ့) လူ စုတိနဲ့ ခွေး ပဋိသန္ဓေနဲ့လဲဆက်မှာပဲ (မှန်ပါ့) ခွေးစုတိနဲ့ အပါယ်ပဋိ သန္ဓေနဲ့ကော (ဆက်မှာပါပဲ ဘုရား) ဘယ်သူ့ သတ္တိထင်သတုံး (တဏှာသတ္တိပါ ဘုရား)။
ဒါကြောင့် တဏှာကို ဘုရားက သိပ္ပိနီ- အပ်ချုပ် သမားနဲ့ တူတယ်လို့ ဟောလိုက်တာ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ကံကတော့ကို အကျိုးပေးတာနဲ့တော့ နီးပါတယ်၊ နီး ပင်နီးငြားသော်လဲ တဏှာချုပ်ငြိမ်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကံဘာမှမတတ် နိုင်ဘူး (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်ပါပြီ)။
တဏှာချုပ်ငြိမ်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် (ကံဘာမှ မတတ်နိုင်ပါ ဘုရား) ဒါကြောင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက တဏှာနိရောဓာ ဥပါဒါန နိရောဓော (မှန်ပါ့) ဥပါဒါန နိရောဓာ (ကမ္မဘဝနိရောဓော) ကမ္မဘဝ နိရောဓောဆို တော့၊
ဪ တဏှာသာ ချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့် ဒီပြင်ဟာတွေက သူ့ အကူအညီရမှ ဆက်စပ်နိုင်တာ (မှန်ပါ့) သူ့ အကူအညီ မရရင် (မဆက်စပ်နိုင်ပါ ဘုရား) မဆက်စပ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
ဒါဖြင့် ခင်ဗျားတို့ တဏှာနဲ့ကံ ဘယ်ဟာ ကြောက် စရာကောင်းသတုံး (တဏှာ ကြောက်စရာ ကောင်းပါတယ် ဘုရား) ပေါ်ပလား (ပေါ်ပါပြီ)။
ဒါဖြင့် ခင်ဗျားတို့သည် တဏှာကြောက်စရာ၊ ကြောက် စရာကောင်းကြောင်းဖြင့် သေသေချာချာ ရှင်းပါပြီ (ရှင်းပါပြီ ဘုရား)။
ဘုံဘဝတွေ ကျုပ်တို့ တစ်သံသရာလုံး စုတိဒုက္ခပြီး ပဋိသန္ဓေ ဒုက္ခပေးလေသမျှ ဘယ်သူတုံး. (တဏှာပါ ဘုရား) စုတိက ဒုက္ခသစ္စာ (မှန်ပါ့) ပဋိသန္ဓေကကော (ဒုက္ခ သစ္စာပါ)။
အင်း ဒါဖြင့် ဒါကို အနန္တရပစ္စယော အခြားမရှိ အောင်ချုပ်စပ်ပေးတာ ဘယ်သူပါလိမ့်မတုံး (တဏှာပါ ဘုရား) သဘောပါပလား (ပါပါပြီ)။
ဒါဖြင့် ကျုပ်တို့မှာတဲ့ တစ်ခုဒုက္ခနဲ့ တစ်ခုဒုက္ခဆက် စပ်ပေးတာဟာ တဏှာစွမ်းရည်ပဲ (မှန်ပါ့ ဘုရား) ပေါ်ကြ ပလား (ပေါ်ပါပြီ)။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် ကံတွေဟာ အလကား ဖြစ်ရတော့ မလားလို့မေးတဲ့ အခါကျတော့၊ အို တဏှာ မချုပ်ငြိမ်းသေး တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ကံဟာ အရေးကြီးတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) သေ သေချာချာမှတ်ပါ (မှန်ပါ့) တဏှာ မချုပ်ငြိမ်းသေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် မှာ (ကံဟာ အရေးကြီးပါတယ် ဘုရား)။
ကိုင်း ဒါဖြင့် ခင်ဗျားတို့ တဏှာချုပ်ငြိမ်းရင် ကံပြုတ် တယ် (မှန်ပါ့) တဏှာ မချုပ်ငြိမ်းရင် ကံထောင် လာတယ် (မှန်ပါ့) သဘောကျပလား (ကျပါပြီ) တဏှာချုပ် ငြိမ်းရင် ကံပြုတ်သွားတယ်၊ တဏှာ မချုပ်ငြိမ်းရင် ကံထောင် လာတယ် (မှန်ပါ့)။
ကံထောင်လာတယ်ဆိုတာ သူအလုပ်-လုပ်မယ် (မှန်ပါ့) မလုပ်ပေဘူးလား (လုပ်ပါတယ် ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက ဟောလိုက် တယ်၊ တဏှာဟာကွာ တဲ့၊ ဘာနဲ့တူသတုံး ဆိုလို့ရှိရင်၊ ကံတွေကို စုတတ်တဲ့ စုပြီး သိမ်းဆည်း တတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် နဲ့ တူတယ် (မှန်ပါ့) သဘောကျပလား (ကျပါပြီ)။
တဏှာသည် ဘာနဲ့တူသတုံး (ကံတွေကိုစုပြီးသိမ်း ဆည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူပါတယ်) ကံတွေကို ကမ္မသမင်္ဂီ- ကံတွေကို စုပြီး သိမ်းဆည်းထားတယ် (မှန်ပါ့) သေသေချာချာမှတ်ပါ။
တဏှာဟာ ဘာနဲ့တူသလဲ (ကံတွေကို စုပြီးသိမ်း ဆည်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူပါတယ်) တဏှာက သိမ်းဆည်းထား တော့ကို ကံတွေဟာက လေလိုလွင့်မသွားဘူး (မှန်ပါ့ ဘုရား) သတ္တိတွေ မလွင့်ဘူး (မှန်ပါ့)။
တဏှာက ဆုပ်ထားတော့ ဟောဒါ အပါယ်ရောက်တဲ့ ကံကလေးကို လွှတ်လိုက်တယ်၊ လွှတ်လိုက်တဲ့အခါ၊ ဒီကံ ကလေးက အပါယ်အကျိုးပေး လိုက်တယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
အဲဒီ ကံကုန်သွားပြန်ပြီဆိုတော့ ဒီကနေ လွှတ်ပြန် တယ် (မှန်ပါ့)သူက စုထားတာကိုး (မှန်ပါ့) တစ်ခု တစ်ခုလွှတ်ပေးနေတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
တော်တော်ကြာကျတော့ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ဖို့ ကံလွှတ်ပေး လိုက်တယ် (မှန်ပါ့) လွှတ်ပေး လိုက်ပြန်တော့ တိရစ္ဆာန်ဖြစ် ရပြန်တယ် (မှန်ပါ့)။
အဲဒီကံကလေး ကုန်ပြန်တော့လဲ သူစုထားတာတွေ က အများကြီးကိုး (မှန်ပါ့) အင်း တော်တော်ကြာ ကျလို့ရှိရင် နတ်ခန္ဓာဖြစ်ဖို့ ကို လဲ သူ ကစုထားတယ် (မှန်ပါ့) လွှတ်ပေး လိုက်ပြန်တယ်၊ အဲဒီ ကံကလေးကျတော့ နတ်ခန္ဓာ ကနေပြီး ကမ္မဘဝပစ္စယာ ဇာတိလုပ်ပြန်တယ် (မှန်ပါ့) ရိပ်မိပလား (ရိပ်မိပါပြီ)။
ဒါဖြင့် ခင်ဗျားတို့ သည်ကံ စွမ်းရည်ကို တဏှာက သိမ်းဆည်း မယူထားလို့ရှိရင် ဒီကံတွေဟာ အလကားဖြစ် တယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) တဏှာက သိမ်းဆည်း ထားလို့သာ လျှင် ကံတွေသည် အမျိုးမျိုး မပျောက် မပျက်ပဲနဲ့ အကျိုးမျိုးစုံ ပေးတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
ဒါဖြင့် ကံနဲ့တဏှာသည် ဘယ်သူကထက်သတုံးလို့ မေးလို့ ရှိရင် ဘယ့်နှယ်ဖြေကြမလဲ (တဏှာက ထက် ပါတယ် ဘုရား) တဏှာကထက်တယ်၊ သဘောပါကြပလား (ပါပါပြီ) ကံနဲ့တဏှာ ဘယ်သူထက်ပါလိမ့် (တဏှာထက် ပါတယ်) တဏှာထက်တယ်တဲ့၊ ကဲ ဦးသံဒိုင်နေရာကျပလား (ကျပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ခင်ဗျားတို့မှာ တဏှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ငါ့မှာ ကံပေါင်း ဘယ်လောက်များ စုထား ပါလိမ့်မတုံးလို့ ဆိုလို့ရှိရင် ဘယ့်နှယ်ပြောကြမလဲ (မရေတွက်နိုင်ပါဘူး ဘုရား)။
ဒါကြောင့် အခု ရှင်ဘုရင် ဖြစ်တယ်၊ နက်ဖြန် ခွေး လောက်မှ မကောင်းတဲ့ဥစ္စာ ဖြစ်တယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) ဒါ ဘယ်သူ့သတ္တိထင်သတုံး (တဏှာသတ္တိပါ ဘုရား)။
အဲ အခုရှင်ဘုရင်ဖြစ်အောင် သူလုပ်လိုက်တယ်၊ နက်ဖြန် ခွေးလောက်မှ မကောင်းတဲ့ဥစ္စာကို သူလွှတ်ပေးလိုက် တယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
လွှတ်ပေးလိုက်တော့ ငါ့ကြောင့် ခင်ဗျားတို့သည်ကား လို့ဆိုရင်ဖြင့် ကမ္မံသတ္တဝိဘဇ္ဇတိ ဆိုတာက အဖျားကိုဆွတ် ဟောတဲ့ပါဠိ (မှန်ပါ့) စင်စစ်တော့ တဏှာက လွှတ်ပေးတာ (မှန်ပါ့ ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
ဒါဖြင့် ကံနဲ့တဏှာ ဘယ်ဟာကြောက်စရာကောင်း သလဲ (တဏှာ ကြောက်စရာ ကောင်းပါတယ်)။
ဒါကြောင့် ရာဂက္ခယော၊ ဒေါသက္ခယော၊ မောဟက္ခယော နိဗ္ဗာန်လို့ မပြောဘူးလား ရှင်းပလား
ကဲ ဒါဖြင့် ခင်ဗျားတို့ ဘာကြောက်ရမလဲ (တဏှာကြောက်ရပါမယ်) ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက် ကြောက် ရတာတုံ းမေးရင် (တဏှာက ဆက်စပ်လို့ပါ ဘုရား)။
အဲ ဟိုဘ၀ ဒီဘဝလည်းဆက်စပ်တယ် (မှန်ပါ့) တစ်နည်းအားဖြင့်လဲ ကံတွေကို လွင့်မသွားအောင်၊ စုတတ် တယ် (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ) ကံတွေကို (လေလို မလွင့်အောင် စုတတ်ပါတယ်) ကံစေတနာတွေကို သူက မပျောက်ရဘူး (မှန်ပါ့)။
မောင်သစ်က ကံတွေလုပ်ထားတယ်၊ ကံအမျိုးမျိုး လုပ်ထားတယ် (မှန်ပါ့) မင်းတဏှာ ချုပ်အောင် မလုပ် သရွေ့ ကာလပတ်လုံးတော့ ဒီကံတွေအဟောသိကံ မဖြစ်ဘူးဆို တဲ့ ဥစ္စာမှတ် ဦးသံဒိုင် ဘယ်သူက စုထားသလဲ (တဏှာ ကစုထားတယ်) ပေါ်ကြပလား (ပေါ်ပါပြီ)။
ဒါကြောင့် ဪ မနေ့က အကောင်းကြီးဟာ ကျုပ် ဖြင့် ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ် မထင်ဘူး၊ ပြောကြတယ် (မှန်ပါ့) သူကလွှတ်ပေးလိုက်တာကိုး (မှန်ပါ့) သေကံလွှတ်ပေး လိုက်တယ် (မှန်ပါ့) ရှင်ကံ (လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်)။
လွှတ်ပေးလိုက်ဆိုတော့ကို၊ အင်မတန် သူသည်ကား လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်၊ ကျုပ်တို့ ခင်ဗျားတို့ကို အကျိုးမျိုးစုံ ပေးနိုင်အောင် သူက ချယ်လှယ်နေတယ်ဆိုတာ ပေါ်သွားပြီ (ပေါ် သွားပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ကံပေါ်မှာ တဏှာချယ်လှယ်တယ်(မှန်ပါ့ ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ) ကံပေါ်မှာ (တဏှာ ချယ်လှယ် ပါတယ် ဘုရား)။
ဒါ့ကြောင့် ယနေ့ကျန်းမာတယ်၊ နက်ဖြန်သေချင် သေတယ်၊ နက်ဖြန်ကျိုးချင်ကျိုးမယ်၊ သန်ဘက်ခါကန်းချင် ကန်းမယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ဒါ ဘယ်သူ့ သတ္တိထင်သလဲ (တဏှာသတ္တိပါ ဘုရား) တဏှာက ကျိုးတဲ့ကံ လွှတ်လို့ရှိရင် ကျိုးရမယ်၊ မဟုတ်ဘူးလား (မှန်ပါ့)၊ ကန်းတဲ့ကံ လွှတ်လိုက်လို့ရှိရင် (ကန်းရပါမယ်)။
ဘာဖြစ်လို့တုံးမေးတဲ့အခါ၊ မနေ့က အကောင်းကြီး ဗျာ ဒီနေ့မျက်လုံးဘာဖြစ်သွားလို့ ကျုပ်ဖြင့် မမြင်ရတော့ဘူး၊ အစ ရှိသည်နဲ့ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့သည် တဏှာရှိသ၍ ကာလ ပတ်လုံး ကံမကုန် (မှန်လှပါ ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
တဏှာရှိသရွေ့ ကာလပတ်လုံး (ကံမကုန်သေးပါ ဘုရား) ကံ ဘယ်တော့မှမကုန်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့ မကုန်တာတုံး မောင်သစ် (တဏှာကလွှတ်လိုက်လို့ပါ ဘုရား) အို သူက စုစုထားတယ် (မှန်ပါ့) ဦးသံဒိုင် ဘာဖြစ်လို့ မကုန်သလဲ (တဏှာက စုစုထားလို့ပါ ဘုရား)။
ကဲ ခင်ဗျားတို့ တဏှာကုန်ရင် ကံအဟောသိကံ ဖြစ်ရမယ် (မှန်ပါ့) တဏှာကုန်ရင် (ကံ အဟောသိကံ ဖြစ်ရပါ မယ်) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
ကိုင်း ဒါဖြင့် သက်သေသာဓက လုံလောက်အောင် ပြပါဦးမယ်နော် (မှန်ပါ့) ဝေဿန္တရာ မင်းကြီးဟာ ဘုရားဖြစ် ကာနီးမှာဖြင့်၊ ဘဝထဲမှာ လူ့ပြည်မှာဖြင့် နောက်ဆုံး ပိတ်ဘဝ ဆိုရင် မလွဲပါဘူး၊ လွဲပါ့မလား (မလွဲပါ ဘုရား) နောက်သိဒ္ဓတ္ထ မင်းသားဖြစ်ဖို့ ရှိတော့တာကိုး (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
အဲဒီ ဝေဿန္တရာမင်း လှူဒါန်းပေးကမ်းထားတဲ့ ကံ တွေဟာ ဦးသံဒိုင် ဘယ်လောက်များသတုံး (အင်မတန် များပါတယ် ဘုရား)။
ရေတွက်နိုင်ပါ့မလား (မရေတွက်နိုင်ပါ ဘုရား) လူ့ ပြည်နတ်ပြည်ကို အကြိမ်ကြိမ်ခံစားလို့ ကုန်နိုင်ပါမလား (မကုန်နိုင်ပါ ဘုရား)။
အဲဒီ မကုန်နိုင်တာကို ဗောဓိပင်နဲ့ ရွှေပလ္လင်မှာ တဏှာ ဖြတ်ချလိုက်တယ် (မှန်ပါ့) တဏှာ ဖြတ်ချလိုက်တော့ ဝေဿန္တရာမင်း လှူထားတဲ့ ဘုံဘဝတွေ အမျိုးမျိုး အကျိုး ပေးပြီးသကာလ နေ့ဖို့ရာ ကံတွေဟာတဲ့ ပေးနိုင်သေးရဲလား မပေးနိုင်တော့ဘူးလား (မပေးနိုင်တော့ပါ ဘုရား) တစ်ခါတည်း လေလို လွင့်သွားတယ် (မှန်ပါ့)။
ဘာဖြစ်လို့တုံး တဏှာချုပ်လို့ (မှန်ပါ့) သိမ်းဆည်း တဲ့လူမရှိတော့ဘူး (မှန်ပါ့) သိမ်းဆည်းတဲ့လူ မရှိတော့ လေလိုလွင့်ပြီး ပျောက်ပျက်သွားတယ် (မှန်ပါ့ ပျောက်ပျက် သွားပါတယ်) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
ဒါဖြင့် ဘုရားကို သက်သေသာဓက ပြလိုက်သဖြင့် နောက်ဆုံးပိတ်ဘဝမှာ လှူလိုက်၊ တန်းလိုက်၊ ပေးလိုက်၊ ကမ်း လိုက်တာ တိုင်းပြည်နဲ့တကွ အလုံးစုံအကုန် မလှူဖူးသည် မည်သည် ဦးသံဒိုင်ရှိရဲ့လား (မရှိပါ ဘုရား)။
အဲဒီ ကံတွေကသာ ခင်ဗျားတို့ အကျိုးပေးနေမယ် ဆိုရင် ဘုရားဖြစ်ပါ့မလားလို့ မေးလိမ့်မယ် (မဖြစ်ပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဘုရားဖြစ်တာ ဘယ့်နှယ်ကြောင့် ဘုရားဖြစ် သွားသလဲ (တဏှာချုပ်လို့ပါ) ရာဂက္ခယောနော် (မှန်ပါ့)
ရာဂက္ခယော ပေါ်လာတယ် (မှန်ပါ့) ဪ သူကုန်လို့ပါကလား (မှန်ပါ့ ဘုရား) ကံကုန်လို့ မဟုတ် ပါလား (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
ဒါဖြင့် တဏှာကုန်မှ ကံကုန်တယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) တဏှာမကုန်ရင် (ကံမကုန်ပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် တဏှာသည် ကံကိုသိမ်းဆည်းတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွားပလား (ရှင်းသွားပါပြီ) တဏှာသည် (ကံကိုသိမ်းဆည်းပါတယ် ဘုရား) ကံကို သိမ်းဆည်းထားတယ် ဆိုတာဦးသံဒိုင် ရိပ်မိပလား (ရိပ်မိပြီ)။
ဒါဖြင့် ခင်ဗျားတို့ ရှင်းရှင်းပြောကြပါစို့ ဘာကြောက် ရမှာတုံး (တဏှာကြောက်ရမှာပါ ဘုရား)။
ဒါကြောင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက၊ အနေကဇာတိ သံသာရံ အစရှိသော ပါဠိတော်ကြီးမှာ၊ ဘုရား ဖြစ်လို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကြိမ်းဝါးတော်မူတဲ့အချိန်မှာ၊ တဏှာ ယောက်ျား လက်သမား၊ နောက်ခန္ဓာအိမ်ဆောက်ရလိမ့်မယ်လို့ မင်းမအောက်မေ့နဲ့တော့၊ ဟုတ်လား (မှန်ပါ့) မင့် အကိုင်း အခက်နဲ့တကွ မင့်အမြစ်ကို တူးပြီးပြီဆိုတော့ ကံကို ကြိမ်းသလား တဲ့၊ တဏှာကို ကြိမ်းသလား (တဏှာကို ကြိမ်းပါတယ် ဘုရား)။
ကြည့်လေ၊ မင်းနောက်ကို ခန္ဓာအိမ်ဆောက်ရလိမ့်မယ် လို့ မမှတ်နဲ့တော့. တဲ့ (မှန်ပါ့) တဏှာယောက်ျား လက်သမား ခန္ဓာအိမ်ကို မင်းဆောက်ရတော့မယ်လို့ မင်းမမှတ်နဲ့တော့တဲ့ ဆိုတော့ ကံကိုမကြိမ်းဘူးဗျ (မှန်ပါ့ ဘုရား) ရိပ်မိပလား (ရိပ်မိပါပြီ)
ဘာကိုကြိမ်းပါလိမ့် (တဏှာကိုကြိမ်းပါတယ် ဘုရား) ခင်ဗျားတို့ကအောက်မေ့နေတာက ကံကကြောက်စရာကောင်း တယ်ဟေ့၊ ကံများ တယ်ကြောက်စရာကောင်းပါကလား တဲ့၊ အင်း မရောင်ရာ ဆေးလိမ်းနေတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
မရောင်ရာကို (ဆေးလိမ်းပါတယ် ဘုရား) ဘာကြောက် နေကြသတုံး (ကံကြောက် နေကြပါတယ်)။
ကံကြောက်နေတယ်၊ ကံများသိပ်ကြောက်စရာကောင်း တယ်ကွာ မမြင်ဘူးလားကွ၊ မနေ့က အကောင်းကြီး၊ ယနေ့သေ ပြီကွ (မှန်ပါ့)။
ကံကသိပ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကွ၊ အင်းအ ကြောက်ကတော့ လွဲနေပြီ (မှန်ပါ့ ဘုရား) မဟုတ်ဘူးလား (မှန်ပါ့)။
အဲဒါ ခင်ဗျားတို့ဟာ လူကြောက်- မကြောက်ပါဘူး တိရစ္ဆာန်ကြောက်-ကြောက်နေတာ၊ မဆိုထိုက်ဘူးလား (ဆိုထိုက်ပါတယ် ဘုရား) ခဲနဲ့ပစ်လိုက်တော့ကို ခဲကိုခွေးက လိုက် ကိုက်တယ် ဆိုတော့၊ ဒီခွေးသည်ခဲသော သူကြောက်တယ်၊ ပစ်တဲ့သူ-သူမကြောက်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) မဟုတ်ဘူးလား (ဟုတ်ပါတယ်)။
အဲဒီတော့ စင်စစ်ပစ်တဲ့လူသာ လိုရင်းပဲ၊ ခဲကလိုရင်းမှမ ဟုတ်ဘဲ၊ မဟုတ်ဘူးလား (မှန်ပါ့) ပစ်တဲ့လူသေရင် ခဲမလာဘူး (မှန်ပါ့)။
အဲဒီတော့ ပစ်တဲ့လူကို လိုက်ကိုက်ရမယ် (မှန်ပါ့) ခဲလိုက်ပြီးကိုက်နေတယ်၊ ဒီခွေးဟာလေ (မှန်ပါ့) ခင်ဗျားတို့ အခုပြောနေတာလဲ. ခဲလိုက်ကိုက်နေတာ (မှန်ပါ့ ဘုရား) ကံကြောက်တယ်၊ ကျုပ်တော့ ကံတော့သိပ်ကြောက်တယ် (မှန်ပါ့) ဘာကြောက်ကြတာတုံး (ကံကြောက်ကြတာပါ) ဟာ သွားပြီပေါ့။ ခင်ဗျားတို့ တိရစ္ဆာန် ကြောက်ကြောက်နေတာ (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
တိရစ္ဆာန်ကြောက် ကြောက်နေတာဟာ အကျိုး ကြောက်နေတာ (မှန်ပါ့) အကျိုးကို ကြောက်နေတာ (မှန်ပါ့ ဘုရား) အကြောင်းက ဘယ်သူပါလိမ့် (တဏှာပါ ဘုရား)။
အဲ တဏှာကပစ်တာ (မှန်ပါ့ ဘုရား) လူပစ်တဲ့ခဲ | လူခဲပစ်တာလဲ တဏှာကပစ်တာ (မှန်ပါ့ ဘုရား) နတ်ဖြစ် | အောင်လဲ နတ်ခဲပစ်တာ (တဏှာပစ်တာပါ) တဏှာကပစ် လိုက်တာ (မှန်ပါ့) အဲဒါ ခင်ဗျားတို့က အင်း-ကံကြောင့် ကံကြောင့် ကံများ တယ်ဆန်းကြယ်တယ် (မှန်ပါ့)။
အံမာ ခင်ဗျားတို့က အတော်ဆိုးတဲ့လူတွေ အကြောင်း အကျိုးမသိတော့ ပြောချင်တာ ပြောနေတာပဲ (မှန်ပါ့) ရိပ်မိ ပလား (ရိပ်မိပါပြီ)။
ဒါဖြင့် ဘာ့ကြောက်ရမလဲ (တဏှာကြောက်ရပါမယ်) တဏှာကြောက်ရမည့်ဥစ္စာ တဲ့၊ တဏှာက စုထားပြီး တစ်ခုချင်း လွှတ်ပေးနေတာ (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
ဒါဖြင့် ဘာကြောက်ကြမယ် (တဏှာ ကြောက်ရပါမယ် ဘုရား) တဏှာကြောက်ရမယ်ဆိုတာ သဘောကျပလား (ကျပါပြီ)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတွေ ယနေ့ကစပြီးသကာလ ပြင်ပါ ဦး (မှန်ပါ့ ဘုရား) ကျပ်ဖြင့် ကံအကြောက်ဆုံးပဲ ကို၊ ကျုပ် ဖြင့် တဏှာအကြောက်ဆုံးပဲသာ ပြင်ကြပါ (မှန်ပါ့ ဘုရား)
ဘယ့်နှယ်ပြင်ကြမယ် (တဏှာအကြောက်ဆုံးပဲလို့ ပြင်ရမှာပါ ဘုရား) ပြင်ရဲပါ့မလား ခင်ဗျားတို့ (ပြင်ရဲပါတယ် ဘုရား) မိဘရိုးရာကြီး စွန့်စွန့်ရဲပါ့မလား (စွန့်ရဲပါတယ် ဘုရား)။
ဟင် (စွန့်ရဲပါတယ် ဘုရား) အမှန်ပြောလာလို့ရှိရင် တော့ စွန့်ရမယ် (မှန်ပါ့)။
ဪ သမုဒယမသေတော့ ဒုက္ခဖြစ်တာပဲ (မှန်ပါ့ ဘုရား) သူက တန်းနေတာပဲ (မှန်ပါ့ ဘုရား) မတန်းဘူးလား (တန်းပါတယ်)။
သမုဒယမသေလို့ ဒုက္ခဖြစ်တာ၊ ကျုပ်တို့ အိုရ၊ နာရ၊ သေရ၊ ရောဂါဝေဒနာတွေရကြ (မှန်ပါ့) သမုဒယမချုပ်လို့ ဒုက္ခဖြစ်ရတာ (မှန်ပါ့ ဘုရား) ဒီလိုရေးရင် မှန်တာ သူ့ဟာ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
အခုတော့ ကံမကောင်း အကြောင်းမသင့်လို့ ဖြစ်ရတယ် ဆိုတော့ ဘယ်မှာ ဒီကံနဲ့ ဘာဆိုင်တာတုံး၊ ဘာမှမဆိုင်ဘူး (မှန်ပါ့ ဘုရား)၊
တဏှာက လွှတ်ပေးလို့ ကံက အကျိုးပေးရရှာတာ (မှန်ပါ့ ဘုရား) ဟိုကအစေခံ မန်နေဂျာက တဏှာ (မှန်ပါ့ ဘုရား) မဟုတ်ဘူးလား (ဟုတ်ပါတယ် ဘုရား)။
အဲဒီမန်နေဂျာနဲ့ အစေခံနဲ့ကို ခင်ဗျားတို့က မကွဲဘူး (မှန်ပါ့) တစ်ခါတည်း အစေခံသာ ရိုက်ချင်တာပဲ (မှန်ပါ့) ရိုက်ချင်ရင်မန်နေဂျာရိုက်မှ နေရာကျတော့မှာပေါ့ဗျ (မှန်ပါ့) သဘောပါပလား (ပါပါပြီ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဘာကြောက်ရမလဲ (တဏှာကြောက် ရပါတယ်) တဏှာကြောက်ရမယ်နော် (မှန်ပါ့) ကဲ ရေထဲ မှာ ပုလဲငုတ်တယ်၊ ဦးခင်မောင် နာရီကလွန်သွားတယ် (မှန်ပါ့) နာရီဝက်ငုတ်ရမည့်ဥစ္စာ အချိန်က လွန်သွားတယ်၊ နာရီဝက်ငုတ်ရမည့်ဥစ္စာ အချိန်ကလွန်သွားတယ်၊ နာရီ သုံးမတ်လောက် ကျသွားတယ်၊ သုံးမတ်ကြာရင် သေတာပဲ ဒီလူ (မှန်ပါ့) ဘာဖြစ်လို့တုံး ဟိုထဲမှာ ပုလဲရှာနေလို့၊ ပုလဲရှာတာ ကြာသွားလို့ (မှန်ပါ့) ရတာကလေးတွေက များတော့ ရသရွေ့ အိတ်ကြီး ထဲထည့်နေလို့။
အင်း ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ရခဲ့တာတွေမို့ အချိန်လွန် သွားတယ်ဆိုတော့၊ ကဲ ဒကာ ဒကာမတွေပဲ စဉ်းစားကြည့် ပါတော့တဲ့၊ ဒီပုလဲရှာတဲ့လူ အချိန်လွန်လို့ သေတာဟာ ကံမကောင်းလို့ သေတာလား၊ တဏှာကြောင့် သေတာလား (တဏှာကြောင့် သေတာပါ ဘုရား) ဟုတ်ပါ့မလား (ဟုတ်ပါတယ် ဘုရား)။
ဘယ်သူ့ကြောင့်သေတာတုံး (တဏှာကြောင့် သေတာပါ ဘုရား) ကဲ ဒါဖြင့် သေမင်းဟာသူပဲ (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
သေမင်းဟာ (သူပါပဲ ဘုရား) သဘောပါပလား (ပါပါပြီ) ခင်ဗျားတို့ကလဲ သေမင်း မိတ်ဆွေ လုပ်နေတဲ့ လူစု (မှန်ပါ့ ဘုရား) ဘယ့်နှယ့်ဆိုကြမယ် (သေမင်းမိတ်ဆွေ လုပ် လုပ်နေကြပါတယ် ဘုရား) ဦးသံဒိုင်တို့လူစု ဘာလုပ်နေကြသလဲ (သေမင်း မိတ်ဆွေ လုပ်နေပါတယ် ဘုရား။
တော်တော်ထူ သေးတာပဲ (မှန်ပါ့ ဘုရား) မဆိုထိုက် ဘူးလား (ဆိုထိုက်ပါတယ် ဘုရား) သေမင်း မိတ်ဆွေလုပ်ရ အောင်လာတယ ်ဆိုကတည်းက၊ သတ်မည့်သူ မိတ်ဆွေလုပ် နေတာ ဒီထက်အတဲ့လူ ဘယ်ရှာတွေ့ပါ့မလဲ (မတွေ့ပါ ဘုရား) အဲ ဒါဉာဏ်ရောက်ရတယ် (မှန်ပါ့)
ခင်ဗျားတို့က အောက်မေ့နေတာက ဪ ဒါကလေး တဏှာကလေးရှိလို့ လိုချင်တာ လိုချင်လည်း စိတ်ကလေးရှိလို့ ယူ-ယူလိုက်ရတယ်၊ တော်တော် သေးတယ်၊ ဒီလိုပြောချင်ပြောနေတာ (မှန်ပါ့) သေမင်းကို ကျေးဇူးတင်တယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
စင်စစ်တော့ သေအောင်သတ်တာလဲ သူပဲ၊ ဒုက္ခ ရောက်အောင် လုပ်တာလဲ (သူပဲ) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ) ဒါကြောင့် သမုဒယသစ္စာလို့ သူ့ကိုခေါ်တာပေါ့ (မှန်ပါ့) သူက ဒုက္ခမျိုးစုံ၏ဖြစ်ကြောင်း (မှန်ပါ့) မဆိုနိုင်ဘူးလား (ဆိုနိုင် ပါတယ်)။
ဒုက္ခမျိုးစုံ၏ (ဖြစ်ကြောင်းပါ ဘုရား) ဘယ်သူပါလိမ့် (တဏှာပါ ဘုရား) တဏှာသမုဒယ (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
ကောင်းပြီ၊ ဒါဖြင့် တဏှာနဲ့ ကံ ယနေ့ရှင်းပါပြီ (မှန်ပါ့) ဘယ်ဟာကြောက်ရမှာလဲ (တဏှာ ကြောက်ရမှာပါ ဘုရား) ကံကိုမကြောက်နဲ့ (မှန်ပါ့) ကံကိုမကြောက်နဲ့ ဘာမှကြောက်စရာ မရှိဘူး၊ တဏှာချုပ်ရင် ကံ-အလိုလို ပျောက်တယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
တဏှာချုပ်ရင် (ကံ-အလိုလိုပျောက်ပါတယ် ဘုရား) ဗောဓိပင်နဲ့ ရွှေပလ္လင်မှာ တဏှာလဲ ချုပ်ပါရော၊ ဝေဿန္တရာ လက်ထက်ကကံတွေ အကုန်ပျောက်တယ် (မှန်ပါ့) အကျိုးပေး နိုင်သေးရဲ့လား (မပေးနိုင်ပါ ဘုရား) မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ ရှိရင်ဖြင့် တဏှာ ချုပ်ရင် ကံပျောက်ပါတယ် (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
ဒါကြောင့် ဝိပဿနာရှုတာသည် ဒကာ ဒကာမတို့ ကံ ချုပ်အောင်လို့ ရှုနေတာလား၊ တဏှာချုပ်အောင်လို့ ရှုနေတာလား၊ (တဏှာချုပ်အောင်လို့ ရှုနေတာပါ ဘုရား) ဒါကြောင့်မဂ်သည် ကံကိုဖြတ်သလား၊ တဏှာကိုဖြတ်သလား အကဲခတ်စမ်း (တဏှာကိုဖြတ်ပါတယ် ဘုရား)။
‘‘ကိလေသေ မာရေန္တော နိဗ္ဗာနံ ဂစ္ဆတီတိမဂ္ဂါ’’ လို့ဖွင့် တယ် (မှန်ပါ) မဟုတ်ဘူးလား (ဟုတ်ပါတယ် ဘုရား)
ကိလေသေ= ကိလေသာတို့ကို၊ မာရေန္တော = သတ်လျှက်၊ နိဗ္ဗာနံ ဂစ္ဆတိ= နိဗ္ဗာန်သို့ သွားတတ်၏။ ဣတိ တသ္မာ= ထို့ကြောင့်၊ မဂ္ဂေါ= မဂ်ဉာဏ် မည်၏
အစရှိသည်နဲ့ ဟောထားတာကို ထောက်လိုက်တော့ ဪ ဒို့သည် အကြောက်လွဲနေပါ သေးကလား ဆိုတာ ပေါ်လာတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ဘာလွဲနေသတုံး (အကြောက်လွဲနေပါတယ် ဘုရား) ဘယ်ဟာကြောက်ကြမလဲ (တဏှာ ကြောက်ရ ပါမယ် ဘုရား) နောက်ကျတော့ ညည်းချင်လို့ရှိရင်၊ ခင်ဗျားတို့ ပါးစပ်ထဲမှာ အမှန်ညည်း ကြပါနော် (မှန်ပါ့) သမုဒယကြောင့် ဒုက္ခဖြစ်ရလေခြင်း၊ ဒါကောင်းတယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)
ကံမကောင်းလို့ဖြစ် ရလေခြင်းမလုပ်နဲ့ (မှန်ပါ့)။
သမုဒယကြောင့် (ဒုက္ခဖြစ်ရလေခြင်း) အဲဒါ အမှန်ဆုံး ပဲ (မှန်ပါ့ ဘုရား) သမုဒယကြောင့် (ဒုက္ခဖြစ်ရလေခြင်း) အဲ ဒုက္ခဖြစ်ရလေခြင်းဆိုရင် တည့်ပြီ (မှန်ပါ) ကံမကောင်းလို့ ဖြစ်ရလေခြင်းဆိုရင် (မတည့်ပါ ဘုရား) တဏှာက ပြုံးနေမှာပေါ့။ လုပ်တော့ငါလုပ်တာကွာ ဟိုကောင်ပေါ်ကျနေ တယ်၊ မပြုံးပေဘူးလား၊ ပြုံးမလား (ပြုံးစရာပါ ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
အဲဒါတဏှာက ပြုံးချင်လို့ ပြုံးရတာလား ခင်ဗျားတို့ အ လို့ ပြုံးရတာလား (တပည့်တော်တို့အ-လို့ပြုံးတာပါ) ဆန်ခိုး မမိဖွဲ့ခိုးမိနေတာ (မှန်ပါ့) ရိပ်မိပလား (ရိပ်မိပါပြီ)။
ဒါဖြင့် ဒီလိုလုပ်ပါ၊ ခင်ဗျားတို့ တိုင်ခြေမှာဝပ်တဲ့ သား ကောင် ခြောက်မျိုးရှိပါတယ်၊ အဲဒီ သားကောင်ခြောက်မျိုးကို တိုင်ခြေမှာဝပ်အောင်လုပ်ပါ (မှန်ပါ့ ဘုရား) မနောဒွါရ အောက်ကို ရောက်အောင်လုပ်ပါ (မှန်ပါ့) သဘောပါ ပလား (ပါ-ပါပြီ)။
ဘယ်အောက်ရောက်အောင်လုပ်ရမယ် (မနောဒွါရ အောက်ရောက်အောင်လုပ်ရပါမယ်) လိုက်မသွားနဲ့နော် (မှန်ပါ့) သူ့အောက်ကို ရောက်အောင် လုပ်ရမယ် (မှန်ပါ့)။
ဒါဖြင့် မြင်စိတ်ကိုလဲ ဝိပဿနာဉာဏ်အောက်ရောက် အောင်လုပ် (မှန်ပါ့ ဘုရား)
ကြားစိတ်ကို (ဝိပဿနာဉာဏ် အောက်ရောက်အောင်လုပ်ရပါ့မယ်)
နံစိတ်ကို (ဝိပဿနာ ဉာဏ်အောက်ရောက်အောင်လုပ်ရပါ့မယ်)
စားစိတ်ကို (ဝိပ ဿနာဉာဏ်အောက်ရောက်အောင် လုပ်ရပါမယ်)
ယားစိတ်၊ ယံစိတ်၊ ကောင်းစိတ်ကို (ဝိပဿနာဉာဏ်အောက် ရောက်အောင် လုပ်ရပါမယ်)
ကြံစိတ်၊ စည်စိတ်တွေကို (ဝိပဿနာ ဉာဏ်အောက်ရောက်အောင် လုပ်ရပါမယ်)။
ဟာ အဲဒါတိုင်ခြေဝပ်ပြီ (မှန်ပါ) တိုင်ခြေဝပ်ပြီ။ သားကောင် ခြောက်ကောင် တိုင်ခြေဝပ်ပါပြီ၊ ခင်ဗျားတို့ ဒီနေ ရာက နေပြီးသကာလ သူတို့ကိုသာလျှင်-တဲ့၊ မောတာနဲ့သူတို့ ရပ်လို့ရှိရင်ဖြင့် သူတို့ကိုခင်ဗျားတို့က နိုင်ပါပြီ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
အဲဒီကျတော့ “ဖန္ဒနံ စပလံ စိတ္တံ့” ဆိုတဲ့ အတိုင်းသူက တုန်တုန်လှုပ်လှုပ် နေရမှ ဒီစိတ် တွေဟာ ဖြစ်တယ် (မှန်ပါ့) “ယတ္တကာမ နိပါတိနော’ ဆိုတာ သူသွားချင်တဲ့ဆီ သွားတာပဲ (မှန်ပါ့)
အဲဒါ ခင်ဗျားတို့က သွားခွင့်မပေးဘဲနဲ့၊ စိတ်ဆိုတာ သွားချင်တဲ့ဆီ သွားတာပဲ (မှန်ပါ့) ကဲ သွားချင်တဲ့ဆီမသွား ရဘူးကွ၊ တိုင်ခြေဝပ်ရမယ်ကွ၊ ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
ဘယ်ဝပ်ရမှာပါလိမ့် (တိုင်ခြေဝပ်ရမှာပါ) မနောဒွါ ရ တိုင်ခြေမှာ သူ့ကို ကြိုးခြောက်ချောင်းနဲ့ ချည်ပြီး လုပ်ပြီး မနော ဒွါရငုတ်တိုင်နဲ့စိုက်ပြီး ဒီနေရာမှာ မောပြီးရပ်ပါစေ (မှန်ပါ့)။
ဘုရားက ဒါဟောတယ် (မှန်ပါ့) မောပြီးရပ်တဲ့အခါကျ တော့ ဘယ်သားကောင်မှ နာလန် ထူနိုင်သေးရဲ့လား (မထူနိုင် ပါဘူး ဘုရား) သူတို့ပြေးချင်တဲ့ဆီ ပြေးရသေးရဲ့ လား (မပြေးရပါ ဘုရား)။
မပြေးရဘူး၊ အကုန်မောပြီး တိုင်ခြေမှာလာဝပ်ရတယ် (မှန်ပါ့) အဲဒိလိုဝပ်လို့ရှိရင်ဖြင့် ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လဲ မြဲပါပြီ (မှန်ပါ့) အသေကော (မြဲပါပြီ ဘုရား) အနေလဲမြဲပါပြီ ဆိုတာ သူတို့ ဆွဲရာမပါတော့ဘူး (မပါတော့ပါ ဘုရား)။
အသေလဲ မြဲပါပြီဆိုတာက တခြားမဟုတ်ပါဘူး တဲ့၊ ဒကာ ဒကာမတို့ သူတို့ဆွဲရာ ပါလို့ရှိရင်ဖြင့် သေခြင်းဆိုးချည်း ပဲ (မှန်ပါ့)။
သူတို့ဆွဲရာမပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် သေခြင်းဆိုး အဖြစ် တော့မရောက်တော့ပါဘူး (မှန်ပါ့ ဘုရား) သဘောပါပလား (ပါပါပြီ)။
ဒါဖြင့် ဘယ့်နှယ်လုပ်ကြမလဲ (တိုင်ခြေဝပ်အောင် လုပ်ရပါမယ်) တိုင်ခြေဝပ်အောင် လုပ်ရမယ် ဆိုတာ သဘော ကျပလား (ကျပါပြီ)။
ဒါဖြင့် ဘယ်စိတ်လာလာ ဦးသံဒိုင် ဘယ့်နှယ်လုပ်ရမလဲ (ဖြစ်ပျက်ရှုရပါမယ်) ဖြစ်ပျက်ရှု (မှန်ပါ) ပေါ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်၊ ဘာလုပ်ကြမလဲ (ဖြစ်ပျက်ရှုရပါမယ်)။
ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်ပျက်ရှုရပါလိမ့်မတုံးလို့ မေးတဲ့အခါကျ တော့မှ ခင်ဗျားတို့ သန္တာန် ပုထုဇဉ်စိတ်ပဲ ရှိတယ် (မှန်ပါ့) ပုထုဇဉ် စိတ် ဟူသရွေ့ လဲ မရှုကောင်းတဲ့ စိတ်ရယ်လို့ မရှိပါဘူး (မှန်ပါ့ ဘုရား) ပုထုဇဉ်စိတ် ဟူသရွေ့ဟာ (မရှုကောင်းတဲ့ စိတ်မရှိပါ ဘုရား)။
ဒါကြောင့် ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဟောပါတယ်၊ မင်း ဟာသူတစ်ပါးစိတ် အကဲခတ်ရတာ မှားတယ်မှန်တယ် နှစ်မျိုး ရှိတယ်ကွ၊ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်အကဲခတ်နိုင်လို့ရှိရင် နိဗ္ဗာန် ရောက်ပါ တယ်တဲ့ (မှန်ပါ့ ဘုရား) ဘာတဲ့တုံး (ကိုယ်စိတ် ကိုယ် အကဲခတ်နိုင်ရင် နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ် တဲ့)။
ဟော ဘာစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဖြစ်ဖြစ်ချင်း သိ အောင်ဖြစ်ပျက်ရှုပစ်ပါ (မှန်ပါ့) ဟော ဒုတိယစိတ်ဖြစ် လာတယ်ဆိုရင် ဖြစ်ဖြစ်ချင်း (ဖြစ်ပျက်ရှုရပါမယ်) စိတ်ထဲ ရှုတော့သူဟာ လောဘစိတ်ပဲ၊ မင်းလဲ ဖြစ်ပျက်ရှုရမယ်၊ ဒေါသ စိတ်လာရင်လဲ (ဖြစ်ပျက်ရှုပါမယ် ဘုရား)။
အင်း ဟင် မင်းဟာ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် စတော့မလို့ ဆိုတော့ ကိုယ့်စိတ်ကိုတော့ သိတယ် (မှန်ပါ့) သူတစ်ပါးစိတ်ကိုတော့ (မသိပါ ဘုရား) မသိဘူးတဲ့ မှားသည်ရှိ မှန်သည်ရှိ ရှိပါ တယ်တဲ့ (မှန်ပါ့)။
ဒါဖြင့် ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်သိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဒကာ ဒကာမတို့ ဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လို့ မှတ်လိုက်ပါ (မှန် ပါ့ ဘုရား) ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်သိနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ (ဝိပဿနာ ဉာဏ်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပါ ဘုရား) အိပ်တဲ့စိတ်မှတစ်ပါး ကျန်တဲ့စိတ်တွေကို အကုန်ရှုပစ်ရမယ် (မှန်ပါ့) အိပ်တဲ့စိတ်မှတစ်ပါး (ကျန်တဲ့စိတ်တွေ အကုန်ရှုရပါမယ် ဘုရား)။
အိပ်တဲ့စိတ်ဆိုတာက မပြောပါနဲ့တဲ့၊ ကိုယ်အိပ်တာကို မသိလို့ ရှုစရာ မလိုပါဘူး (မှန်ပါ့ ဘုရား) ကောင်းကျိုးလဲ မပေးဘူး၊ ဆိုးကျိုးလဲမပေးဘူး၊ အဲဒီစိတ် ဘဝင်စိတ်ဆိုတာက (မှန်ပါ့ ဘုရား) သဘောပါရဲ့လား (ပါ-ပါတယ် ဘုရား)။
ကျန်တဲ့ ဇောစိတ်ဟူသရွေ့ကိုဖြင့် ဦးသံဒိုင်တို့၊ မောင် သစ်တို့က မမိ မိအောင် ရှုရမယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) ဇောကမှ အကျိုးပေးတာ၊ ဘဝင်က အကျိုးမပေးဘူး (မှန်ပါ့)။
ဘဝင်ကနောက်ဘဝ ဒီဘဝ ဘယ်တော့မှ အကျိုးပေး ရိုးထုံးစံမရှိဘူး (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
ဒါဖြင့် ဘယ့်နှယ်လုပ်ကြမယ် (ပေါ်ချင်တဲ့စိတ် ပေါ် ပေါ်ဖြစ်ပျက်ရှုရပါမယ် ဘုရား)။
အဲ ကိုယ့်သန္တာန်မှာ ပုထုဇဉ်စိတ်မှတစ်ပါး တခြား စိတ်မပေါ်ပါဘူး (မပေါ်ပါဘူး ဘုရား)။
အဲဒီတော့ ပုထုဇဉ်စိတ် ပေါ်သရွေ့ကို အရိယာစိတ် ပြောင်းလိုက်ပါ (မှန်ပါ့ ဘုရား) ရှင်းပြီးနော် (ရှင်းပါပြီ) ပုထုဇဉ်စိတ် ပေါ်သရွေ့ကို (အရိယာစိတ်ပြောင်းရပါမယ်)။
အရိယာစိတ်ပြောင်းလိုက်ပါဆိုတာက ပုထုဇဉ်စိတ် ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့် တဲ့၊ ဒီက ဖြစ်ပျက်ကို ရှုနိုင်တဲ့ အရိယာ စိတ်ပြောင်းလိုက် (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ပြောင်းလိုက်လို့ ရှိရင်ဖြင့် တဲ့၊ အခုရှုနိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ နေနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အရိယာဖြစ်ရမယ် (မှန်ပါ့) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ) ရှုနိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ နေနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ (အရိယာ ဖြစ်ရမယ်) ဘာပြောင်း ယူတာတုံး၊ အို ပုထုဇဉ်စိတ်ကို အရိယာစိတ် ပြောင်းယူတာ (မှန်ပါ့ ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ)။
ဘယ်လိုမှတ်ကြမယ် (ပုထုဇဉ်စိတ်ကို အရိယာစိတ် ပြောင်းယူတာပါ ဘုရား)။
အဲဝိပဿနာရှုဆိုတာ ကုသိုလ်ရအောင် ရှုတာလား၊ စိတ်ပြောင်းတာလား (စိတ်ပြောင်းတာပါ ဘုရား)။
ဦးသံဒိုင် ဒါသေသေချာချာမှတ်ပါ (မှန်ပါ့) တော်တော် အရေးကြီးတဲ့ စကားလို့မှတ်ပါ (မှန်ပါ့ ဘုရား)။
ပုထုဇဉ်စိတ်ဟူသရွေ့ကို အရိယာအဖြစ်ကို ပြောင်းတာ ပါ (မှန်ပါ့) သဘောကျပလား (ကျပါပြီ) ပုထုဇဉ်စိတ်ကို (အရိယာအဖြစ်သို့ ပြောင်းတာပါ) ဘယ်လိုပြောင်းရမှာပါလိမ့် (ဖြစ်ပျက်ရှုရမှာပါ) ပထမ ပုထုဇဉ်စိတ်တွေ လာလိမ့်မယ် တဲ့၊ ဟုတ်လား (မှန်ပါ့) ပုထုဇဉ်စိတ် တွေချည်းပေါ်မယ် (မှန်ပါ့)
ပုထုဇဉ်စိတ်တွေချည်း ပေါ်တာကိုခင်ဗျားတို့က မိအောင်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့် ဒါ အရိယာဖြစ်တာပဲ (မှန်ပါ့) သဘောကျပလား (ကျပါပြီ)။
ဒါဖြင့် အရိယာကမွေးလို့ အရိယာ ဖြစ်သည် မဟုတ်ဘူး (မှန်ပါ့) ပုထုဇဉ်စိတ်ကို ရှုနိုင်လို့ အရိယာဖြစ်တာ (မှန်ပါ့) ပုထုဇဉ်စိတ်ကို (ရှုနိုင်လို့ အရိယာဖြစ်တာပါ ဘုရား) ပုထုဇဉ်စိတ်ကို ဖြစ်ပျက် မြင်အောင်ရှု သောကြောင့် မဂ်စိတ် ပေါ်တယ် (မှန်ပါ့)။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ယနေ့တရားမှာ တိုင်ခြေမှာဝပ် တဲ့သားကောင် ခြောက်ကောင်ကို ဘုရားက ဥပမာပြတယ်၊ တိုင်ခြေမှာဒွါရခြောက်ပေါက်မှာ ဖြစ်တဲ့ စိတ်ဟာ ပုထုဇဉ်စိတ်တွေ (မှန်ပါ့ ဘုရား) သဘောကျပလား (ကျပါပြီ)။
အဲဒီ ပုထုဇဉ်စိတ်က ခင်ဗျားတို့ ပြောင်းလိုက်လို့ ရှိရင် လဲအရိယာဖြစ်နိုင်တယ် (မှန်ပါ့ ဘုရား) မပြောင်းတတ်လို့ရှိ ရင် ပုထုဇဉ်စိတ်ချည်း တန်းပေါ်တယ် (မှန်ပါ့)။
မပြောင်းတတ်ရင် (ပုထုဇဉ်စိတ်ချည်း တန်းပေါ်ပါ တယ် ဘုရား) မြင်တယ်၊ ဥပမာအားဖြင့် ခံစားမယ်ဆိုတော့ ပုထုဇဉ်စိတ်ပေါ်တာပဲ၊ လိုချင်တယ်ဆိုတော့ (ပုထုဇဉ်စိတ်ပါ) စွဲလမ်းတယ်ဆိုတော့ (ပုထုဇဉ်စိတ်ပါ) အားထုတ်မယ်ဆိုတော့ (ပုထုဇဉ်စိတ်ပါ ဘုရား) ပုထုဇဉ်စိတ်တွေချည်း ပေါ်နေတယ်. (မှန်ပါ့)။
အဲဒီစိတ်တွေကို ခင်ဗျားတို့မပေါ်ရအောင် မြင်စိတ်ဖြစ် ပျက်ရှုလိုက်တော့ကို ပုထုဇဉ်စိတ် ပျောက်ပြီး အရိယာစိတ် ရောက်တယ် (မှန်ပါ့)။
စိတ်ဖြစ်ပျက်ရှုလိုက်တော့ (ပုထုဇဉ်စိတ် ပျောက်ပြီး အရိယာစိတ် ရောက်ပါတယ် ဘုရား)။
အဲ ပုထုဇဉ်စိတ်ကအပျောက် (မှန်ပါ့) အရိယာ စိတ်က (အရောက်ပါ ဘုရား) ဆိုတော့ သေချာပလား (သေချာပါပြီ)။
ဒါဖြင့် အရိယာဖြစ်ချင်လို့ ရှိရင်ဖြင့် ပုထုဇဉ်စိတ်ကို ဖြစ်ပျက်ရှုမှ အရိယာအဖြစ်သို့ ရောက်မယ် (မှန်ပါ့) ပုထုဇဉ် အဖြစ်ကို ပုထုဇဉ်ကို မရှုနိုင်လို့ရှိရင် အရိယာအဖြစ်သို့ မရောက် ပါဘူး (မရောက်ပါ ဘုရား)။
တစ်ခါသွားဦး၊ သောတာပန်သန္တာန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကို ရှုပါ မှ သကဒါဂါမ်ဖြစ်မယ် (မှန်ပါ့) သဘောကျပလား (ကျပါပြီ)။
သောတာပန်သန္တာန်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေ ဟူသရွေ့ ဖြစ်ပျက် ရှုနိုင်မှ (သကဒါဂါမ်ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား) သကဒါဂါမ် သန္တာန် ဖြစ်တဲ့ စိတ်တွေရှုနိုင်မှ (အနာဂါမ်ဖြစ်ပါတယ်) အနာဂါမ် သန္တာန်ဖြစ်တဲ့ စိတ်တွေ ရှုနိုင်မှ (ရဟန္တာဖြစ်ပါတယ် ဘုရား)။
ကဲ ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ စိတ်ပြောင်းဟာ အရေး ကြီးလာပြီ (မှန်ပါ့ ဘုရား) သဘောပါလား (ပါပါပြီ)။
ဘာအရေးကြီးသလဲ (စိတ်ပြောင်းတ ာအရေးကြီး ပါတယ် ဘုရား) ပြောင်းတတ်ပလား (ပြောင်းတတ်ပါပြီ ဘုရား)။
ကဲ- ဒါဖြင့် ပြောင်းတတ်လို့ရှိရင်ဖြင့် ခင်ဗျားတို့ အရိယာဖြစ်ရပါလို၏ ဆုတောင်းရမှာလား၊ ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ပြောင်းနေတာပဲလို့ ဆိုတာ ဝေဖန်လိုက်ကြစမ်းပါ (ရှုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ပြောင်းနေတာပါ ဘုရား)။
ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ပြောင်းနေတာ (မှန်ပါ့) မရှုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဟာ (မပြောင်းပါ ဘုရား)။
ဒါဖြင့် ဝိပဿနာမရှုဘဲနဲ့လဲ အရိယာ ဘယ်သူမှ ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး (မဖြစ်ပါ ဘုရား) ဘာကြောင့်တုံး မပြောင်းမိလို့ (မှန်ပါ့ ဘုရား) ရှင်းပလား (ရှင်းပါပြီ) ယနေ့ တရားမှာ သဘောပါပလား (ပါ-ပါပြီ ဘုရား)။
ကဲ အချိန်စေ့ပြီ ယနေ့ညတော်ဦးစို့။